ူဟယါငအကါံျ ာႁုျအငကညျာႁချ ့ဘငကညျ့ဘငကညျ့စဓစဓမၶ နု.ညျလယးၠချု႑.ညျအႁနူတျ ေအငကချ ူဟယါငအကါံျ နုအျာႁချေဆငချေငကအျမၶ စဥကလယာႁချိၾႁချ ာဃယ၎ႁ ာကိယဘငကချနုဴ.ညျုကႏာကနမ.ၶ ာကိယုကႏ၏ိ့အျဘကဲူကႏနမ.ၶ ုဆစျလယုဆစျေ႔ ုကႏညချေငကအျလငၶ စၚ႔ုကႏ ေဳငချ၎ႁ စနမချ ႊ?ယာႁချွၫႎးၠချစဥက ူၾၠ့ျ၎ႁ ့႑ႁနုဴႁ.ဳၿ.ချ ်ငကစျုဴၠချနိဆစဥကစက့ျ ့ကဲ့႑ႁါ႑ႁမၶ နးႁိံျုဴၠချာႁချ ၏စယဖယုဴၠချာႁချမၶ ာ႑႔နိဆအက႔ ာ႑႔နိဆ ါံျ နုဴ.ႁဳၿ.ချာႁချေငကအျမၶ ာ႑႔အဃ႔ုကႏ ာ႑႔အဃ႔ ိၿ.႔ႊ?ယာႁချွၫႎ နိဆါဴငၠချအငကညျာႁချါံျ ါ႑ႁွကႏာႁချေကငအျမၶ ညုကႏ ာကုျူငုျေ႔ါံျ ။ငကအျေ႔ အႁချနုအျစရငကချာ.ညျၵ ညုကႏေဳညျုၭဖုက ပငကုျနါဴချာ.ညျါံျ ႊၾႁုျႊ?ယ၎ဓုကႏ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔ ာိံျမၶ
ွါယ ိယ့ကဲာ႑႔ါံျ စၚ႔ုကႏေဳငချဖုကနုဴ.ညျါ႑ႁာကုျူငုျ၎ႁစဴညျ စၚ႔ုကႏါု႕ဖုက ာကုျူငုျါု႕ဖုက ၫ႑ႁာႁချနမ.ချါံျ ့႑ႁအဲ္ေငကအျ၎ဲၶ ့ငကအျါံျမ စရငကချစၚ႔ုကႏးၠချနအႁ ဘကဲူကႏိံျ ဘကဲူကႏါ႑ႁွုျန်ဴ.ႁါံျ ့႑ႁအဲ၎ဲေငကအျမၶ ာကုျူငုျ၎ႁါံျ ဘကဲိယွုျန်ဴ.ႁစရငကချ ဘကဲစဥက ါ႑ႁနုအျေွုျာ႑ဲာ.ညျ ာ႑႔နး.အျုကဲနမ.ချၶ စႁုျူတျုကႏ Cbox ါံျ အၿ့ျ့႑ႁနဆချမၶ ဆ႑ုျါ႑ႁုကႏုဆစျာိံျမၶ Cbox ါံျ ဳဟဉာူငုျ English းငၠုျုျနစချချ နးႁ့႑ႁာႁုျုကႏမၶ ွါယ စၚ႔ုကႏေ႔၎ႁ ဘကဲူကႏ ဳဟဉူတျါံျ ုဴငၠ့ျနုအျာႁချမၶ ွါယ ိကႏုကႏ ူငုျ ေါၡူငုျန၏ဖ့ျညုျနု႑ႁနု႑ႁါံျ ့႑ႁါ႑ႁူတျ း.ႁး.ႁမၶ ။ငကအျဘံျိယ ုဴ.႔နုအျေနအချမါ႑ႁၶ း.ႁ့႑ႁး.ႁ ိယ့႑ႁိယါံျ ့႑ႁအဲမၶ အဃ႔ုဴ.ါံျ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ူငုျနေညျါူငုျ့႑ႁာႁုျ းငၠုျုျနစချါံျ နုႍချ်ကအျူတျ ိၿ.႔ုကႏုဆစျဘငကအျဘၾ. ွါယ နးႁ့႑ႁိယနဆၿ.အျး.ချစက့ျၶ ဳဟဉစၚ႔ိၿ.႔ူငုျာညျနအံျ ်ငကစျာႁချစၚ႔ုကႏ ိၿ.႔ူငုျဘၾ.ါံျမ ိၿ.႔ုကႏုဆစျူငုျဘၾ.ါံျ စအငအျနႊ.ႁူတျာိံျမၶ ရ႔ာငုျါ႑ႁုကႏုဆစျာၢယ အႁချန္ဟႁနုအျ keyboard အက႔ အုျဘကဲူငုျ A1 mon လငၶ နးႁအငအျဘကဲူငုျာညျ A1 mon န့ချမၶ ွါယ ူဃၠႏါံျ နးႁနစဴချာႁချုကႏူငုျ A1 mon လငမၶ
နြ.ဳဟဉာႁချါံျ အငအျေ.အၿ့ျမၶ ဆဴယေနဳဓချလငၶ ာငုျါ႑ႁ့ကဲါံျ နု.ညျါု႕စဥက လယာ႑႔ုကႏလယာ႑႔ ါ႑ႁနုဴ.ႁးလယဆႉေျာ.ညျ ါ႑ႁဘငကချစနူတျလယဆႉေျာ.ညျါံျမ လယာဘံျနုအျာႁချ ာကုျူငုျ၎ႁါာဴငၠချ ာကုျူငုျေ႔၎ႁ ာကိယ်ကအျုကႏနႊုျနမ.ဂ ာကိယႊစျဘနစချနႊုျနမ.ဂ ာကစရငကချာ႑႔ ိယႊႁၾုျုကႏနႊုျနမ.ဂ စၾငုျွၫႎ လယုဴၠချဘံျနုအျာကုျူငုျ၎ႁ ႊႁၾုျႊ?ယုကႏာၢယ စကႏအက႔ ာကုျူငုျေ႔ နးႁ်ငကစျအမသာ.ညျနမ.ချၶ အက႔ာ႑႔စဴညျါံျ စဥကလယ်ငကစျာႁချးၠချာဃယါာဴငၠချနူတျ ဘကဲူကႏစဥကဳဟႈိမ.ချာႁချၵ ဘကဲူကႏ စဥကါငကအျါ်.ညျနုဴ.ညျာႁချစနမချါု႕စဥကါံျ စၾငုျာငုျါ႑ႁႊၾႁုျာၢယနူတျ ညုကႏူငုျိံျိံျ ညုကႏ ဘကဲၵ ရကစျၵ မာဧ.ချ ုကႏစူႁချညချာ.ညျာႁချမၶ €ါံျာံစနမချစဥက ဳဟႈိမ.ချာႁချ၎ႁ လယးၠချု႑.ညျစဥကာညျအႁ ါ႑ႁအဲနုအျၶ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျ ါု႕လယအၿ့ျျနူတျ ါု႕စဥက ဘကဲူကႏနုဴ.ညျာႁချါ်.ညျာႁချါံျ နးႁာႁုျါအတျ ၏စ.ုအျုဴၠချ ာ.ညျန့ချနမ.ချၶ
ုဴၠချဘံျနုအျာကုျူငုျူၾၠ့ျ၎ႁ အချါက၎ျအသ ဘ႑႔ာနူ.ညျမေသၶ
posted by jawpakao at 5:16 PM
စအငကညျေ.ုကႏ စရငကချုၾငညျးၠချစဥက စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔ုကဲနမ.ချ
စၚ႔ုကႏ ေ“ု.၎ႁ ့ငကအျၫ႕ုကႏ နုႍချစနူတျိၾႁချာကုျူငုျအက႔ စနမချ နပ.ညျပ.ၫ႑ႁုဴၠချါံျ ဆဴယုကႏေနဳဓချလငၶ ်ငကအျိံျာႁချာ႑႔ာ႑႔ စၾငုျာငုျါ႑ႁူံ.႔ၫံ.ႁာကုျူငုျာံနးႁဳငက့ျန၎ဓတျအက႔ နႊချနုအျအက႔ ႊစျနုႍချဆဴ.႔ူတျ ၫံ.ႁာကုျူငုျအၾငာ႑႔မၶ ။ငကအျမနုဴ.ညျုဴၠချာကုျူငုျဖုကိံျုဴၠချာႁချ ါ႑ႁ။ငကအျ (၂)ါငအက ့႑ႁနစချး.ချုကဲနူတျ ူငုျစအငကညျူတျ ါ႑ႁအငကညျ စင်ံျစငကအျ=စချအငကညျမၶ ၫ႕ုကႏ ေဳငချ်ဳဟဉစအငကညျာကုျူငုျ၎ႁ ာကေ႔ါ႑ႁစအငကညျနဖအျအျါံျ့႑ႁအဲး.ႁး.ႁမၶ မညျအၾႁူတျါံျနူတျ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျ၎ႁ နုဴ.ညျဘုျ့႑ႁာ.ညျမၶ ဘကဲ့ကဲုဴၠချ စၚ႔ုကႏ စငကအျူငုျုဴ.နအႁါံျမ ။ငကအျမနုဴ.ညျာႁချာကုျူငုျ ူၾၠ့ျ၎ႁနူတျ ုနစဓအျုမငပ. ဖုကစငကချ႒စႈ ့႑ႁနဆချမၶ စၚ႔ုကႏ ေဳငချရကချ ။ငကအျေဳငချဆဴယ နုဴ.ညျာႁချ ာကုျူငုျ၎ႁ ာိံျမၶ
ညုကႏ ေဳငကုျေူငကုျေ႔နူတျ နုဴ.ညျုနာဴ.ညျာ႑႔ာ႑႔နအံျ ့႑ႁဖ႕့႑ႁပ.ႁ(ေနမတျ နဖၿ.ျ့.့႑ႁအဲ) လႁချါ႑ႁအက႔ိံျ နုဴ.ညျါံျမ ေဳငချါ႑ႁဆအင ်သဆဃငါံျ ။ငကအျ (၉ယ၀၀)ည.းႈ=စချာႁချအ႑ႏၠၶ စၳၫ႕ုကႏ ေဳငချရကချာံ ါံျဆဴယနအံျ ၫ႕ုကႏ (၄ယ၀၀)ည.းႈ နအံျ ိကႏုကႏ ်ငကစျ (၉ယ၀၀) ည.းႈါံျ ုစံျနုဴ.ညျာႁချ ာကုျူငုျ၎ႁမၶ မႁချနုအျ ာကုျူငုျဖုကအက႔ စၚ႔ုကႏ်ငကအျနအႁ နး.ချန၏စတျအငကညျလငၶ ေအငကချဖုကဳဟဉါံျ ဳဟဉါ႑ႁ ေအငကချဖုက့ကဲါံျ ဘ႑႔ာစႁုျ”ဆငၠ့ျ့ကဲုဴၠချ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျဖုကါ႑ႁုဴၠချမၶ အက႔စဴညျ လယုဴၠချဘံျာကုျူငုျနူတျ အဲအကငညျာကုျူငုျာညျ အက႔ ုဴၠချွကႏာႁချ ာကုျူငုျေ႔့. ့႑ႁအဲမၶ ူၾင့ျလယဘံျ လယဘကႏ့. ါဴငၠချအငကညျာႁချ “ုစျိံျာႁချရငက့ျအဃ႔မၶ ုဴၠချဘကႏ ဘံျနုအျူၾၠ့ျုကဲ ုဴၠချုကႏ ၏ိ့အျူၾၠ့ျုကဲါံျ အချါက၎ျအသ ဘ႑႔ာနူ.ညျမၶ ူၾၠ့ျ၎ႁ စၚ႔်ငကအျနအႁဳဟစျအငကညျ ာကုျူငုျစရငကချာညျစဥကါံျ စရငကချုၾငညျးၠချစဥက စအငကညျ်နေ.ညျနု႑ႁနု႑ႁမၶ ညုကႏ အချမညျအၾႁလယအႁ့.့႑ႁအဲမၶ စရငကချနိဆါံျ ုကႏ္ဟၠညျါဴငၠချါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျမၶ ့ငကအျါံျမ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔၎ႁ စရငကချ အႁချန္ဟႁၫ႕ နေညျအ.နညအျါ႑ႁာၢယ ႊစျနုႍချစအငကညျႊ?ယ၎ဓုကႏ ညႀ.ဆ.ာညျန၎တျါံျ အချမညျူတျ နုႍချ၏စႁချဆဴ.႔ုဴၠချာႁချမၶ
ေအငကချါံျမ ူၾၠ့ျစရငကချ ။ငကအျနႊုျုကႏ ာညျစဥက ိယအဲုကဲၵ ိယွုျ်စျာႁချုကႏ နစၳစအငကုျိႈာတျုနမတျ႒ဖႈုကဲါံျ စအငကညျႊ?ယာႁချုႏက စၚ႔ုကႏာကုျူငုျေ႔ာိံျမၶ အချမညျအၾႁန”အႁနအႁနူတျ လႁချါ႑ႁစအငကညျုကႏာ.ညျါံျ ။ငကအျါ႑ႁေဳငချါ်.ညျစအငညျေ. စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔ုကဲနမ.ချၶ ူၾၠ့ျ။ငကအျစနု.ႁါ႑ႁူတျ ူငုျစအျါံျ ၫ႑ႁာႁချအၾ.့ူငကချမၶ ါ႑ႁေဳငချာ႑႔အဃ႔ာၢယ စအငကညျႊ?ယ၎ဓုကႏ ာကုျူငုျာညျစဥက အုျစအငုျူတျါာဴငၠချ စအငကညျ်ကအျ ရကစျ ုႊကစျူငုျတ႑ႁနမ.ချေသၶ အဃ႔၎ႁ ။ငကအျ၎ႁနုအျုဴ.မၶ
posted by jawpakao at 7:49 PM
ဘကဲဘ႑ဲိႈပငကတျေူကႏေဆႈေပကအျအႁ မစျႊဖုျာႁချ လယႊ?ယွၫႎူဤဉးၠချူၢၠချ
ရကစျတ႑ႁ ဘဲက်ကႏိၿ.႔ာႁချုကႏ ုၚငၠစျဆႉငၠစျႊ?ယွၫႎ ာဆကဆကၫကဥ ာိံျမၶ
posted by jawpakao at 2:55 PM
စၚ႔ုကႏးၠချစဥကနအႁ းၠချနဖၿ.ျးၠချူၢၠချုကဲ းၠချမယဘ႑႔ာါဴငၠချနူတျ ႊ?ယုဴၠချွၫႎါံျ ့႑ႁနိႁဓ၎ဲ္ငက့ျမၶ စၳၫ႕ါ႑ႁနိႁဓါံျ စကႏအက႔ ႊစျါဴငၠချအငကညျာႁချါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျာႁချမၶ စၚ႔ုကႏ ေ“ု.၎ႁ ၫ႕ုကႏ ဆချဆၾအျးၠချူၢၠချနူတျ စအငကုျ္နေ.တျုကႏ ဆချဆြၡည.ပုအႁ လႁချါ႑ႁူကစျုကႏေနိဓတျအက႔ လႁချါ႑ႁ စလႈုကႏ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျါံျ စၚ႔ုကႏ ်ၾအျအဃ႔ (၂၇ ၊ ၈ ၊ ၂၀၀၇) ါံျ ူငုျါနမချစဤဲ အငအျုဴၠချူတျမၶ ူငုျါနမချစဤဲ ဘ႑႔“အယါံျ ့ငကအျၫ႕ိံျာႁချ ူငုျဘၾ.ါံျာ႑႔ဆ.ျ ါဴငချာႁချါံျနူတျ ာ႑႔ဆ.ျ ာ႑႔စဴညျါံျ စၚ႔ုကႏ အဃ႔ေ“ု.၎ႁ ူငုျူနူ.ချ“အယအငအျာႁချအႁါံျ ရငက့ျူၾင့ျအၿယနူတျ့႑ႁာ.ညျမၶ ူငုျူနူ.ချ“အယအႁါံျ ဘ႑႔ာါဴငၠချုင်ၽ ၫ႕ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ ့နအတျစအငကညျခဃ့ျ နုဴချ်ုျပထျည.ည.ါံျအက႔ လယးၠချု႑.ညျအႁ ့႑ႁန=စ်ငကအျအက႔ ဆ႑ုျါ႑ႁ ႊ?ယေ.ွၫႎါံျန့ချ အငအျုဴၠချါဴငၠချုကႏအၿယမၶ စၚ႔ုကႏအငအျုဴၠချဘ႑႔ာါဴငၠချ၎ႁါံျ ၫ႕ုကႏ ါနု.ႁဆချစၚ႔းၠချစဥကနအႁ စအငအျါံျ ဘ႑႔ာနေ.ညျမၶ
အက႔စဴညျ ၫ႕ုကႏဆချ းၠချမဳဓချ (််ျနအ႑)အႁ ွုျဘုငကစျုဴၠချဘနဘချ ႊ?ယုဴၠချွၫႎ ါ႑ႁစ႑ငၠချ။ဓအဃ႔မၶ အဃ႔ုဴ.ါံျ ညုကႏ=ိ့အျဆချ ။ငကအျုဴႁန့ချမ စဓုဴၠချုကဲနူတျၶ အဃ႔၎ႁ ဆကဲာၿင့ျဆကဲ ဆချ ႊ?ယုဴၠချွၫႎ ၏ိ့အျ။ငကအျ (၃၀၀) ၫ႑ႁနမ.ချ ၫ႕စရငကချ နေနေစျစဲအငအျုဴၠချ စၚ႔ုကႏအဃ႔၎ႁမၶ အက႔စဴညျ ၫ႕ုကႏုနညႁနအႁ စၚ႔ုကႏးၠချူၢၠချ နူံတျအ.ညျ ႊ?ယုဴၠချွၫႎါံျ ၫ႕ေူကႏေဆႈစၿ.ညျအႁ းၠႏးၠငုျဘ႑႔ာဆႉ.အျာဃငၠ့ျအက႔ ဆကဲ။ကချအုျ ဆကဲအႁချီဖုျ၎ဓ ့႑ႁာ႑႔ုကႏ ါဓမတါံျ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျစရငကချ နေညျအ.နညအျ ဘ႑႔ာါဴငၠချါံျ အငအျုဴၠချာႁချမၶ ဘကဲအႁချီဖုျာႁချ ာဆကဆကၫကဥ ါံျ စၚ႔ုကႏနေညျအ.နညအျ စအငကညျႊ?ယုဴၠချ ါဴငၠချေငကအျါ႑ႁွကႏနုအျူတျမၶ
စၚ႔ုကႏအဃ႔၎ႁ ၫ႕ုကႏ နဆအျဆကဥ ဳာႈဆချအႁ ႊ?ယုဴၠချွၫႎါံျ ဘကဲရငက့ျ့ျအဃ႔့႑ႁနဆချါ႑ႁအဲနုအျမၶ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ုဟန္.ေျအႁ နဆ.ညျေ.နပံညျအႁ ုၾ.အျူတျါဴႁချအက႔ ါဖႁေျအက႔ ႊ?ာႁချွၫႎ နမ.ချ ါ႑ႁအဲနုအျူတျမၶ
အဃ႔ူုျုမသနူတျ နစၳႊ?ယွၫႎအႁ၎ႁ ေငကအျေ. ့႑ႁနဆချ၎ဲစက့ျါံျ မႁချနုအျ စၚ႔ုကႏ ူငုျူနူ.ညျ“အယ ဘ႑႔ာါဴငၠချါံျအက႔ နအ.ျဳဟါ႑ႁမၶ မႁချနုအျေဆငချႊ?ယုဴၠချာႁချွၫႎအႁ၎ႁအက႔ နစၳ၎ႁ ါဴႁချစနမချူကစျနစၳစအငကုျ ိႈာတျုနမတျ႒ဖႈာ႑႔ “ုစျနလ.ညျုဴၠချာႁချုကႏ နစၳေႁချဖၿယန့ချနမ.ချၶ ဖၾ.စျစျာအျ႒ဘ႔ါံျ ေကစျီူကဲဆၾငချါငအကာ.ညျ့႑ႁနဆချမၶ ဆၾငချါငအကါံျာ႑႔ေဳငချ့႑ႁနဆချ ာ႑႔ေဳငချာၢယ နးႁိယူဟယအၾယုကႏ လယနူ.ုအႁန့ချမၶ ေအငကချ နူ.ုညငအင့ကဲူတျ ဖၾ.စျစျိကႏါံျ ာအျစၿငုျၫ႑ႁ့႑ႁနဆချမၵ ဖၾ.စျစျ်ငချါံျ =ိ့အျဖၾဉၫ႑ႁ့႑ႁနဆချ ါံျမ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ၎ႁါံျနူတျ ၏ိ့အျနးႁးငၠညျူဟန်ံျုဴၠချာႁချနဆ႔နဆ႔မၶ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ၎ႁ ေဳငချ=စ့ျူူက႔ါံျ နးႁ“ုစျနလ.ညျုဴၠချာႁချနုႁ႑နုႁ႑မၶ စဥက နု.ညျလယးၠချု႑.ညျစဥကါာဴငၠချနူတျ လႁချေူကႏေဆႈစၿ.ညျ၎ႁ ါ႑ႁ=စ့ျူူက႔=စ့ျ့ျာ.ညျ ါံျ ါ်.ညျေငကအျ်ငကအျၶ
းၠချစဥကနူတျ ာ႑႔အဃ႔့႑ႁနဆချာ႑႔အဃ႔ ဘကဲ့ကဲူတျ ူဤဉါံျမ ဘကဲါငအက ူဟယအၾယမ.ချွ.႔ါံျုကဲ ါငကအျါ်.ညျာႁချအ႑ႏၠန၎ဓတျနအံျ နးႁိယူဟယအၾယမ.ချွ.႔အငကညျး.ႁး.ႁနမ.ချါံျ ာငုျါ႑ႁ့ကဲ၎ဓ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔မေသၶ
ဘကဲတ႑ႁအႁချနုအျူတျ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျနေညျအ.နညအျာ႑႔ိၿ.႔မၶ
းၠချူၢၠချုကႏ နဆအျဆဥက ႊစျႊ?ယွၫႎစဴညျမ
အဃ႔၎ႁ စၚ႔ုကႏ ူဤဉးၠချူၢၠချ နုႍချႊ?ယုဴၠချွၫႎစဴညျ ါ႑ႁအဲနုအျ ၫ႕ုကႏစရငကချ ါဴယုတျည.ည.မၶ ဘကဲူကႏ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ၎ႁ ုၾ.အျူိကႏူတျ ုၾ.အျူိကႏူတျ ညုကႏဘကဲ၏စချ ႊ?ယာႁချွၫႎ စၚ႔ုကႏ းၠချစဥကါံျ ုၾ.အျ့႑ႁနုဴႁန့ချ ာငုျါ႑ႁ့ကဲမၶ စၚ႔ုႏကအဃ႔၎ႁ စၚ႔ုကႏ နူံတျအ.ညျ ႊ?ယုဴၠချွၫႎ ည=ိ့အျာၿင့ျ (၅၀) ၏စချ ႊစျႊ?ယုဴၠချွၫႎ စဴညျမၶ စၚ႔ုကႏႊ?ယုဴၠချွၫႎ၎ႁ ၫ႕ုကႏ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျအႁ မစျႊငချနႊ.ႁာၿင့ျ ဘ႑႔ာါဴငၠချ ါ႑ႁအဲနုအျူတျမၶ ာၿင့ျ။ငကအျူကႏါံျ ့႑ႁအဲုဴယ၎ဲမၶ
ဘကဲ၎ႁါံျ အႁချန္ဟႁူတျ စၚ႔ုကႏ နေညျအ.နညအျ နေပံ.စ်ငန္အျ ာိံျမၶ
ဘကဲစၚ႔းၠချူၢၠချႊ?ယုဴၠချွၫႎုကဲ စၚ႔ုကႏအ႑ၠႏမယ မဳဓချ းၠချနဆအျဆဥက(််ျနအ႑)နူတျ ႊ?ယုဴၠချွၫႎနမ.ချ ၫ႕ုကႏဋ.ညျစရငကချ ရငကုျအ. ့ကဲူတျမၶ
posted by jawpakao at 5:18 PM
ူငုျူနူ.ချ“အယ အဃ႔စဴညျါအယာညျ ာမၫကုျုကႏ (၆၀) တဓ နဘ.ျးၠချာညျအၾင (ဘ့ကႏ)
အႁချအ႔ုကႏ နဘ.ျးၠချာညျအၾငအက႔ၵ နမချအဴၠချနုဴ.ညျ။ငကအျေ.ေငကအအျ်ငကေျ ဘအငကုျ္နေ.တျအက႔ ွတျစဃၠ့ျ၎.မေသၶ
းၠချစႁချနု.ႁနဖအျအျ ……………… ိုျစအညျေငကအျလင
စဴညျါအယဘဴယ။ယနု.ညျါု႕ာညျ …………… ိယေႁချဖၿယနမ.ချၶ
ဆၿ.ႁ ၁၃၆၉ၵ ါငအကဳၚ႔ဆႈနစချၵ
ဆၿ.ႁ ၂၀၀၇ၵ ါငအက ေတျနါအျ ၂၈ၶ
ူငုျူနူ.ချ“အယ အဃ႔စဴညျါအယာညျ ာမၫကုျုကႏ (၆၀) တဓ နဘ.ျးၠချာညျအၾင (ဘ့ကႏ)(ႀ.ဆ.ဘၾ.)
ေ”ုငာျ (၆၀)န၏ာ.ုျ ာ႑ညျောဟငၠယဆ.ယ နအ.ျူံညျနမယနည၊ ႊကအျ၏စညျန“ု၏ခ.ဳဟုျ
ာ႑ညျောဟငၠယဆ.ယာဟ.ယ ……………………… နဆ႑ယ်လျယ“ု
််ျာံညျနဆ.၏စလျနႊ.ချ်က …………… အလျနွ.ုျ“ု
ာ႑ညျောဟငၠယဆ.ယူ႑အျန၏ာ.ုျာႃနအ.ျူံညျနမယ …… နေ.ချမာလျၶ
၁၃၆၉ ဳကၫံ်ျ ၵ တဓနဳဓချူ၏စလျ၊
၂၀၀၇ ဳကၫံ်ျၵ “ဆါကအျူ (၂၈)မုျၶ
ူငုျဆတ၎ျ အဃ႔စဴညျါအယာညျ ာမၫကုျုကႏ (၆၀) တဓ ၫ႕ ထုႉဋ နဖၿ.ျ နဘ.ျးၠချာညျအၾင
ညုကႏ ပကႏိကချနုအျ ါူ.ညျအဴလယ မ.ဖ.ီငမ.ဖျ … နုဴ.ညျး.ႁိယိံျၵ နုအျး.ႁိယါ႑ႁၵ ေ.း.ႁိယ်ငကစျ… ါံျအက႔
… ာညျအေျိယနု.ႁဆၾအျိံျာ႑႔၏ိ့အျ ဘ႑႔်ၾအျနမ.ချၶ
… ညစဴညျါအယး.ႁနု႑့ျ ိယေႁချဖၿယဘ႑႔်ၾအျနမ.ချၶ
… ုႁုကဆကႏာညျ ာညျအေျ ိယ္ညျုျာ.ညျ ဘ႑႔်ၾအျနမ.ချၶ
ါငအကဳၚ႔ဆႈနစချၵ ဆ.ဆၿ. (၂၅၅၁) ဆၿ.ႁ
… ၂၈ၵ ေတျနါအျ ၂၀၀၇ၶ
အချ်ၾအျၶ ၶ ူငုျူနူ.ချ“အယအႁတ႑ႁ ့ငကၫ႕ိံျာႁချ ူငုျအၿယ legal အက႔ စၚ႔ုကႏ ေ႔ဆကချန်.႔ာႁချ scanner ၎ႁ ့႑ႁာႁုျ္ေငကအျါံျမ ာူငုျနဆံျာႁချအႁါံျ နုႍချႊစျဘနစချူတျ ဆၾတျတျါံျာိံျမေသၶ
posted by jawpakao at 10:07 AM
အဃ႔၎ႁ စၚ႔ုကႏ ူဤဉးၠချဘနါဓနူတျ လယးၠချု႑.ညျ ူဤဉးၠချဘနါဓအႁ ႊ?ယုဴၠချွၫႎမၶ ်ႊ?ယုဴၠချွၫႎါံျ ၫ႕ါပယ ၉ယ၀၀ ည.းႈ ာိံျမၶ ်ိံျႊ?ယွွၫႎ ါအာကုျ ္ဟ.နဖၿ.ျအက႔ ု႑.ျန်ံျေ. ါဴႁချ ဆည.အျနစညျ ာိံျမၶ စၚ႔ုကႏလယႊ?ယွၫႎ ူစၨနုႍချ်သူကစျဘနါဓါံျ ိံျေ. ာၿင့ျ နဖၿ.ျုကႏ၏ိ့အျ ူၾင့ျ၏ိ့အျာၿင့ျ။ငကအျ ူဃဲ ိံျုဴၠချမၶ ာၿင့ျႊ?ယွၫႎအႁါံျ ၫ႕ူဤဉးၠချဘနါဓုကဲၵ ၫ႕နတဓုကဲၵ ၫ႕ဆည.အျနစညျုကဲၵ ၫ႕အ.တုကဲ စဓူကစျုဴၠချ စၚ႔ႊ?ယွၫႎါံျနမ.ချၶ စၚ႔နုႍချူကစျးၠချါံျ ၫ႕ေူကႏေဆႈစၿ.ညျအႁ မစျႊငချဆၾ.ညျဆၾၠုျနုအျ ုၚငၠစျဆႉငၠစျႊ?ယွၫႎ (၃၁)အဴ စ႑ငၠချ ။ငကအျ (၁) ည.းႈ၏စချမၶ အက႔ နုႍချဘူယနႊ.ႁ လယႊ?ယွၫႎအႁနမ.ချါ႑ႁအဲနုအျ ၫ႕ုကႏ စရငကချနေညျအ.နညအျည.ည.မၶ
ဘကဲတ႑ႁ ဘကဲႊ?ယုဴၠချွၫႎ စၚ႔ုကႏ းၠချဘနါဓာိံျမၶ
ဘကဲတ႑ႁ အႁချနုအျန္ဟႁူတျ ၫ႕ စရငကချနေတျါဟ.ဖဧႈမ. ာိံျမၶ
posted by jawpakao at 6:33 PM
ူငုျူနူ.ချ“အယ ါနု.ႁိႈာတျုနမတျ႒ဖႈ နု.ညျးၠချေနမချါာဴငၠချ
ဆ႑ုျါ႑ႁိံျေႊႁုျေရကဲ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျေ႔ုကဲ ါ႑ႁိံျေႊႁုျေရကဲ စနမချရကညျါ်.ညျိႈာတျုနမတျ႒ဖႈစၚ႔ုကႏုၾငညျးၠချစဥက ဘကဲူကႏ ါနု.ႁနု.ညျးၠချေနမချအႁစဓူကစျာႁချ စၚ႔ုကႏ နစၳဳဟႈိမ.ချ ိႈာတျုနမတျ႒ဖႈါာဴငၠချုကဲအက႔ စအငကညျ်႑ႁူတျ ူငုျူနူ.ချ“အယ ါနု.ႁိႈာတျုနမတျ႒ဖႈ နု.ညျးၠချေနမချါာဴငၠချစအငအျူတျ စၚ႔ုကႏ ်ၾအျအဃ႔ ၂၄/၈/၂၀၀၇ ါံျ ာိံျမၶ
စၚ႔ုကႏ ူငုျါံျတ႑ႁ စၚ႔ုကႏ ူဤဉးၠချူၢၠချ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ ့နအတျစအငကညျ ခဃ့ျနုဴချ ်ုျပညျ ါာဴငၠချ စၚ႔ုကႏ ်ၾအျအဃ႔ (၁၅/၈/၂၀၀၇)ါံျမ ိံျာႁချစနမချ ရကဆႁချ ႊ?ယာႁချွၫႎ စၚ႔ုကႏ ူဤဉးၠချူၢၠချ ာ႑႔ီမျ ့႑ႁု စၚ႔ုကႏ နိဆၵ စၚ႔ုကႏမယါာဴငၠချနူတျ ုအကႏိံျုဴၠချ စနမချ ရကဆႁချ ႊ?ယုဴၠချွၫႎေငကအျမၶ စၚ႔ုကႏ စနမချ ရကဆႁချိံျာႁချ၎ႁ ဘကဲၫ႕ါနု.ႁ ုဟန္.ေျအႁုကဲၵ ၫ႕ါနု.ႁ နဆ.ညျေ.နပံညျ(်႑ာျယေ.ယရံချ) အႁုကဲ လႁချနစၳႊ?ယွၫႎါ႑ႁူကဲ စူကဲစူၨာႁချ ညည႔ စုကဲစမ.စျ းၠႏးၠငုျာႁချအႁါံျ ိံျ့႑ႁနႊုျမၶ စ႑ာုင်ၽလယစုကဲစမ.စျအႁ အုျုဴၠချလယႊ?ယွၫႎုကဲၵ အႁချန၏ါ.႔မစျ်စျာႁချ ညည႔ ဆငု‘.ာၿင့ျာ႑႔ါ႑ႁူကဲအႁါံျ လႁချါ႑ႁမစျ်စျုကႏုင်ၽ၎ႁာ.ညျ စအငကုျ္နေ.တျူတျစၚ႔ုကႏူငုျူနူ.ညျ“အယါံျာိံျမၶ
။ငကအျါံျ့႑ႁု စန၎.တျုကႏ စနမချးၠချု႑.ညျ ါ႑ႁ။ငက့ျူူႁာ.ညျ ၫ႕ေူကႏေဆႈစၿ.ညျ လႁချါ႑ႁနုဴ.ညျုကႏ နစၳစငုၚငၠစျအုျုဟ. (ာစဤႁုကႏ ါနု.ႁ NLD ုကဲၵ ါနု.ႁ ိႈာတျုနမတျ႒ဖႈ နု.ညျးၠချေနမချါာဴငၠချုကဲၵ ေူကႏေဆႈစၿ.ညျုကဲ)ၵ အက႔စဴညျ စ႑ာမစျ”ုငၠချူတျ ုၚငၠစျဆႉငၠစျု႑ယႀ. အႁုကဲၵ မစျ”ုငၠချူတျ ဆၾ.နုဴ.ညျစနမချးၠချု႑.ညျဆကဲ္ေငကအျုကဲါံျ လႁချါ႑ႁဘူယုကႏ၏စ့ျ့ျာ.ညျါံျ ေ.အျူတျ စၚ႔ုကႏ ူငုျူနူ.ချ“အယါံျာိံျမေသၶ
ူငုျူနူ.ချ“အယတ႑ႁ ိံျာႁချႀ.ဆ.ဘၾ.ာိံျမၶ ေအငကချ ူငုျူနူ.ချ“အယါံျ စအငကညျ်႑ႁူတျုကႏနမ.ချၶ
posted by jawpakao at 5:38 PM
နု.ညျါု႕လယာွ.ညျါု႕ုၚငၠစျဆႉငၠစျာညျၵ လယာွ.ညျုၚငၠစျဆႉငၠစျစဴညျါအယာညျအႁလယါဴငၠချေသ စၚ႔ုကႏ ႀႋႁုျေ႔၎ႁ ႊၾႁုျူတျ ညုကႏဘကဲရကစျ ုၚငၠစျဆႉငၠစျစဴညျါအယာညျ စၚ႔ုကႏ ဆႉ႔ႀႋႁုျေ႔၎ႁါံျ ညုကႏရကစျ ုၚငၠစျဆႉငၠစျစဴညျါအယဆကဲ္ေငကအျ ်ကအျူတျုကႏ ့႑ႁာ.ညျမေသၶ ့ငကအျနးႁါံျ ။ငကအျရကစျၫ႑ႁစၚ႔ုကႏ ဖနမချေ႔န့ချ နုဴ.ညျနုအျ Flash ာ႑႔အက႔ စအငကညျႊ?ယူတျုကႏ ာိံျမၶ ပတျစၚ႔ုကႏဖနမချ လယဘံျူငုျအႁ ဘကဲုၚငၠစျဆႉငၠစျာညျစဥက ၫ႑ႁာၢယ စူႁချူတျုကႏညုကႏ E mail ဘ႑႔ူဤဉါံျလငၶ နု.ညျါု႕လယာွ.ညျါု႕အႁနူတျ ်႑ႁနာအဤ. ူဤဉႀႋႁုျေ႔၎ႁအက႔ စူႁချဘ်ငကစျညချာၢယ အချါက၎ျအသ ဘ႑႔ာနူ.ညျန့ချမၶ ပတျစၾငုျာငုျါ႑ႁါ႑ႁ ဘကဲရကစျုၚငၠစျဆႉငၠစျ ါာဴငၠချာၢယနူတျ ုကႏညချ Email adress ာၢယ စူႁချဘ်ငကစျုကႏာ.ညျာႁချမၶ
ဘကဲရကစျဆၿ.ႁ၎ႁ ရက႔်ံျူတျ ဆ႑ုျ အဃ႔စဴညျါအယာညျနူတျႊၾႁုျႊ?ယူတျုကႏစၚ႔ုကႏ ၎ႁနမ.ချၶ
ာညျၫႁ႑ာႁချစၚ႔ုကႏးၠချစဥကနအႁ စၚ႔ုကႏ ဆၿ.ႁ၎ႁ အဃ႔စဴညျါအယာညျ နုဴ.ညျဘ႑႔နအၾချနမ.ချ ါ႑ႁအဲနုအျူတျမၶ စၚ႔ုကႏေ“ု.ေဳငချအချတဓအျါဓအျ၎ႁ ာညျစၚ႔းၠချစဥကနအႁ နုဴ.ညျဘိံျာ.ညျာႁချမနအံျ ာညျ လယာ်ငကစျာႁချ းၠချဆဗ.ချါာဴငၠချနူတျ ်ငကစျုဴၠချ အဃ႔စဴညျါအယာညျာၢယ လႁချနဆၢ.ႁနုဴ.ညျနုအျ အဃ႔စဴညျါအယာညျာ.ညျါံျ ုကႏ၎ဓဆအင စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔၎ႁာိံျမေသၶ
posted by jawpakao at 11:10 AM
နစၳႊ?ယွၫႎးၠချူၢၠချ ိံျုဴၠချါ႑ႁစညျအဃ႔အက႔မၶ အဃ႔၎ႁ းၠချူၢၠချာကစရငကချာ႑႔နအၾချနု႑ႁနု႑ႁ့႑ႁအငကညျ၎ဲမၶ ့ငကအျါံျမ စၚ႔ုကႏ ါ႑ႁေဳငချဆဴယာ႑႔ူ်ကအျျ၎ႁ ဘကဲမ႔းၠချူၢၠချ ႊ?ယုဴၠချွၫႎါံျ စနု.ႁနုအျဘကဲအက႔ နုႍချစအငကညျ်ကအျူတျ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔ာိံျမၶ
ေဳငချ်အငအျႊ?ယွၫႎ (“ဆနါအျ ၂၂ ၊၂၀၀၇)
ုၚငၠစျဆႉငၠစျလယ႒ဘသာ႑႔အဴ ဆကဲ်ငကအျဆကဲ်ရငကအျ ႊ?ယာႁချွၫႎ
ဘကဲလယးၠချု႑.ညျ ူဤဉးၠချူၢၠချအႁ စဓူကစျုဴၠချစၚ႔ုကႏ နစၳႊ?ယွၫႎ
ဘကဲုၚငၠစျဆႉငၠစျ ႊ?ယွၫႎလယ႒ဘသာ႑႔အဴ ့ကဲအ႑ႁာႁချ စနမချါ႑ႁႊ?ယွၫႎ
ဘကဲလယးၠချု႑.ညျူကစျႊ?ယွၫႎါာဴငၠချ ိယိကချရစျ အႁချနစဴ.စျာႁချ စၚ႔ုကႏု႑ႈ်ုျ (ႀ့.ညျ)
ဘကဲထဉေကချအ.ညျ ႊ?ယာႁချွၫႎ စၚ႔ါအရကချါူကအျ ေနာမငု.ညျ
။ငကအျမ နစၳႊ?ယွၫႎူၾၠ့ျ၎ႁ လငချာႁချုကဲနူတျ ၫ႕ုကႏ လယေ.ုၚငၠစျ နစၳႊ?ယွၫႎ၎ႁ ့ကဲူတျါံျ နစၳွၫႎ၎ႁ လႁချါ႑ႁနုဴ.ႁႊၿ.ညျေ. ေူကႁုၾငညျးၠချစဥကာ႑႔ာ.ညျါံျ ါ်.ညျာႁချနမ.ချ ါံျ ၫ႕ုကႏ ုငကႊချနုဟ.ျ ့ကဲူတျ စၚ႔ုကႏ ဋ.ညျစရငကချည.ည. ါ႑ႁွကႏနုအျူတျမၶ ၫ႕ုကႏ ေူကႏေဆႈနူတျ ါဴ.႔ာႁချ ုကငႊချနုဟ.ျ ိကႏုကႏ ေဳငချအဃ႔၎ႁ မစျ်စျ့႑ႁါ႑ႁ၎ဲမၶ စၚ႔ုကႏ ေဳငချလယနအႁစၳာႁချန့ချ မာဧ.ချလယနအႁ နုႍချအငအျုဴၠချာိံျမၶ ေအငကချလယနအႁ့ကဲူတျါံျ ိံျ့႑ႁိံျါံျ ့႑ႁအဲ၎ဲနမ.ချၶ
ွါယ ေအငကချ ူငုျ“အယ စအငကညျူတျါံျ ့ငကအျၫ႕ုကႏ မ.ဆႈထအကုကဲ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ေူကႏေဆႈနုအျူတျိၿ.႔ လႁချလယဳဟႈိမ.ချႊ?ယွၫႎအႁ ့႑ႁါႁချဳဟႈအငကညျါံျုကဲမ ိၿ.႔့ကဲူတျါံျ နးႁ့႑ႁိံျ နးႁိံျေ.”ုႈ”ုႈ စၚ႔ုကႏ ူဤဉးၠချိၿ.႔ဘ႑႔ာါဴငၠချမၶ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ဆၾငချ့႑ႁဳငက့ျ လယးၠချု႑.ညျ ိံျိိငကုျၶ ိိငကုျလယးၠချု႑.ညျါံျ ၫ႑ႁူဤဉဖုကန၎.တျါံျနူတျ ့႑ႁူတျူတျစၚ႔်ငကအျၶ ဆၾငချေပကအျ၎ႁ လႁချါ႑ႁ=စ့ျူူက႔=စ့ျ့ျာ.ညျ ညည႔ နစၳဘအငကုျ၎ႁာ႑႔န့ချနမ.ချ်ငကစျအမသာ.ညျနမ.ချၶ
ဘကဲရကစျဆကဲ္ေငကအျါံျ အႁချန္ဟႁူတျၫ႕ုကႏ ာကုျူငုျါာဴငၠချာိံျအက႔ ဆ႑ုျါ႑ႁိံျ ေႊႁုျ စနမချးၠချစဥက ်ၾအျဆာဤဲူတျ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔ာိံျမၶ
posted by jawpakao at 1:53 PM
နစၳႊ?ယွၫႎးၠချူၢၠချ “ဆနါအျ ၂၂ ယ၂၀၀၇
posted by jawpakao at 8:40 AM
စၚ႔ုကႏးၠချူၢၠချ နစၳႊ?ယွၫႎါံျ ိံျး.ႁ့႑ႁး.ႁ စၚ႔ုကႏ်ငကအျနအႁ ိံျာႁချဆႁဆပ ါဴငၠချနု႑ႁနု႑ႁေငကအျမၶ ူဃႏၠါံျ ညုကႏဖုက ့႑ႁါ႑ႁွကႏူတျအက႔ ိံျာ.ညျ့႑ႁနဆချ နႊချနုအျူတျမၶ ညုကႏ စဥက ၫ႑ႁစၚ႔ုကႏ ာဃယ၎ႁနူတျ ိံျ့႑ႁာ.ညျစက့ျ နႊချနုအျူတျမၶ ွါယ ာၿင့ျ၏ိ့အျုကႏူဃဲ၎ႁ စၚ႔ုကႏ နစၳႊ?ယွၫႎ၎ႁ စဓူကစျုဴၠချနမ.ချါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျူတျ း.ႁး.ႁမၶ ညုကႏ ာၿင့ျေ.ွကႏနုအျူတျ့႑ႁနဆချမၶ ဘကဲရကစျ နစၳႊ?ယွၫႎၫ႕ုနညႁ၎ႁ ိံျုဴၠချညရကစျဘ႑ႈိႈပတျ ါံျနအံျ စကႏအက႔ နးႁဳငကချုဴငၠုျုဴၠချမၶ ပတျစၾငုျာငုျါ႑ႁဘကႏနုအျ ဘ႑ႈိႈပတျ နစၳႊ?ယွၫႎးၠချူၢၠချာၢယ ညုကႏာကုျူငုျ နညအျနညာ.ညျ စအငကညျႊ?ယူတျ ဆကဲရကစျဘ႑ႈိႈပငကာိံျမၶ
posted by jawpakao at 8:28 AM
ူငုျ“အယါနု.ႁုာႂအႈ ဳဟႈိမ.ချနဖၿ.ျ ည႔ု႔။အျအျ ဆ႑ုျါ႑ႁဘဴယအငအျ ၫ႕ႀ႔နုဴတျန၏စတျ
်ၾအျအဃ႔ “ဆနါအျ (19) ဆၿ.ႁ 2007 ၶ
ေအငကချာစဓူကစျ စၚ႔ုကႏ ေ်ႈေဖညျ နစၳ့ုငကစျ့နဘချ စၚ႔ုကႏ ါအာကုျ နဒ.ႁဳညျနဖၿ.ျ းၠချူၢၠချ (မညျုကညျ ႒ာငၠ၊နအ.ျဳညျယာနရံ၊) စၚ႔ုကႏ်ၾအျအဃ႔ (၂၃ ၊ ၈ ၊ ၂၀၀၇)ါံျ ေအငကချဘ႑႔ဆၾတျနုဴ.ညျဘိံျေ.နမ.ချာိံျမၶ
ုၶ စၚ႔ုကႏ ေဳငချနုႍချ (၁)ည.းႈုငအျအျါံျ ်နုဴႁ နစၳဳဟႈိမ.ချလယးၠချု႑.ညျ ူနူ.ချေ. ဆ႑ုျါ႑ႁစႁုျေဳညျုၿ.ာိံျမၶ
ါၶ နမံျနဆံျုၚငၠစျဆႉငၠစျေ.ဖ.ည႔ ၏စ့ျူူက႔ါာဴငၠချၶ
ြၶ နမံျနဆံျိ်ချုၚငၠစျ လငချ စင႑ၠချ (၁)ာႈနညအျ ုကလယာ၏စ့ျူူက႔ ညုကႏနစၳဳဟႈိမ.ချိႈာကႏုနမတျ႒ဖႈုကဲၵ နုက.ႁနစၳဳဟႈိမ.ချ ေနဳဓချေမ.ာၿင့ျုကဲၶ
ခဃၶ ညုကႏုၚငၠစျေနမတျျ စနမချုၾငညျးၠချ ဳုျၫ႕စနမချဘကချါၿသ (တာျယနမယႊုျ ၏စလျႊ႔နမယဳုျ) ါံျ ၫ႕ုကႏ ိဓရငကုျအ.နူတျိံျ လယဳဟႈိမ.ချစၚ႔ဖ.အျနူတျိံျ ့ကဲူၾငချ (၁၅)ာႈနညအျ
်ၶ ၫ႕ုကႏေၽ.ူငုျစရငကချန“အႁာ႑႔ ့ကဲူၾငချ ညုကႏုၚငၠစျေနမတျ နဆ.ချုူယ့႑ႁာ.ညျ စနမချနဆၿ.အျစငကညျ=ိစျုၾငညျးၠချၶ (၏ာညျာ.ၫငကချခႁ န်ဟယု႑ုျ ်ဲယစ႑.ယနမယ ေရႃစျနအ.ျစကႁ ဖ.အျူာျယ်ကႁ) (၁၅)ာႈနညအျၶ
ွၶ ၫ႕ုကႏဆချာ႑႔ဖုက ့ကဲူၾငချ စနမချာချဆႈနုက.ႁစနမချဘကချါၿသ (ေ႕ာနအ.ချ၊၏ဳချယၫံချ၊ ဆဲူန်.ချ၊၏ဳချယ)(၁၀)ာႈနညအျၶ
ဖၶ ၫ႕ုကႏ လယဆာၣ.ာ႑႔အဴ ့ကဲူၾငချ ညုကႏုၚငၠစျေနမတျ စနမချနုဴ.ႁ့ည.ချ ခဃ့ျဘၿင့ျ္ဟ.ၵ ပ႔နဒ.ႁညုျၵ နုက.ႁ ်ၾဘငကုျမ.အျ(၁၀)ာႈနညအျၶ
(ဖဧ) ၫ႕ုကႏ ု႑ယႀ.ာ႑႔အဴ ဆ႑ုျါ႑ႁ့ကဲေ. ညုကႏုၚငၠစျ ခဃ့ျု႑.ချ ့႑ႁအကစျ (ာအ႕လဲနဆ. ာကညျ၊္ငကယာဟ.ယ)(၁၀)ာႈနညအျၶ
လၶ ၫ႕လယအငကညျ်ငကစျုဴၠချ လယးၠချု႑.ညျ ့ကဲါူ.ညျ (၃)အဴၶ (၁၀) ာႈနညအျၶ (၁၀)ာႈနညအျၶ
ေ်ႈေဖညျနအၾချၶ ၶ ႀငုျူတျလယနအၾချ (၃)အဴအက႔ ဆ႑ုျါ႑ႁ့ကဲူာငချ စၚ႔ုကႏ ေဳညျုၿ.၎ႁ လယာ႑႔ (၂၀)ာႈနညအျၶ
ရကစျနုဴႁေဳညျုၿ. ညုကႏိ႑ုျ ုာၣ.ာန“ုၶ
(၃) လယအငကညျ်ငကစျေဳညျုၿ.အႁ လႁချါ႑ႁုအုျညချ စနူ.ႁဘကဘကလငါံျ ညုကႏနာအဤ. ွတျစဃ့ျူတျအႁာိံျမၶ
ါနု.ႁနုဴ.ညျဘိံျ နစၳဳဟႈိမ.ချနဖၿ.ျ ည႔ု႔။အျအျ ဆ႑ုျါ႑ႁဘဴယအငအျ ၫ႕ႀ႔နုဴတျန၏စတျ စအငအျူတျ ူငုျ“အယာိံျမၶ
စၚ႔ုကႏ ေဳငချအဃ႔၎ႁ ညုကႏးၠချနဖၿ.ျစဥက းၠချူၢၠချ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ဆဴၠချစအငကညျ ခဃ့ျနုဴချ ဆၾဉီဓအျါာဴငၠချ (၄ွ၅ွ) ါံျမ စနမချါရကဆႁချလယးၠချု႑.ညျ ိံျုဴၠချာႁချ ”ုႈ”ုႈမၶ ၫ႕ေူကႏေဆႈစၿ.ညျနူတျ မစျႊငချိတျာႁချ ုၚငၠစျဆႉငၠစျဳဟႈိမ.ချ ါာဴငၠချာစာဤႁုကႏ ုၚငၠစျဆႉငၠစျု႑ယႀ. န”အႁအႁုကဲမၶ ။ငကအျမ မစျႊငချိတျာႁချ ုကဲနူတျ ေအငကချေ်ႈေဖညျ ဘ႑႔ူဤဉါံျ နးႁိံျနမ.ချါံျ ၫ႕ါနု.ႁလယစအငအျုဴၠချူငုျ“အယ၎ႁ ်ႈဖညျာႁချမေသၶ
ူငုျ“အယ၎ႁတ႑ႁုဴ.႔န်ဴ.ႁူတျ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျႀႋႁုျ www.maynyane.blogspot.com ာိံျမၶ ဘ႑႔“အယာငုျါ႑ႁဘံျာၢယ ေ.ဘံျနုအျ းငၠုျုျနစချချာ.ညျာႁချမၶ
posted by jawpakao at 9:27 AM
ဘကဲါ႑ႁ်ကအျ Alpha Keyboard စၚ႔ုကႏ နု.ညျဘဟဉအ.ဖုက
အဃ႔၎ႁ ပတျစဥကနုဴ.ညျ ႀႋႁုျာ႑႔ာၢယ ါ႑ႁအုျူငုျ Unicode ါ႑ႁာ.ညျ ဘကဲါ႑ႁ်ကုျ Keyboard ါံျ စဤငၠညျႊ?ယ၎ဓုကႏ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔ာိံျမၶ ဘကဲ့ကဲူတျ အဃ႔ုဴ.ုဴ.နအႁါံျမ ပတျစဥကအုျူငုျာညျုကႏ font unicode ာ႑႔ာ႑႔ာၢယ အုျုကႏ Keyboard ေအငကချ၎ႁာၢယ ူငုျဖုကနးႁ့႑ႁအငအျစၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျမၶ ့ငကအျါံျမ စဥကိယစႁချနအ.႔ုကႏ Alpha Keyboard ာံ အုျူငုျာညျ font unicode nemon နးႁာႁုျစၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျဖုကာိံျမၶ ဘကဲါ႑ႁနစဴ.စျ Keyboard ါံျ စၚ႔ုကႏ ဆႉ႔ာကုျူငုျေ႔၎ႁ ဘ႑႔ုငကစျုဴ. အႁချန္ဟႁနုအျ Program Keyboard လငၶ password ါံျ zawgyimandalay ာိံျမၶအႁချန္ဟႁအက႔ နစဴ.စျ်ကအျ စၚ႔ုကႏ နု.ညျဘဟဉအ.ဖုကလငၶ နစဴ.ျအက႔ာၢယ ါ႑ႁာႁုျာႁချစၚ႔ုကႏ Taskbar နု.ညျဘဟဉအ.ဖုကာ.ညျါံျိယနစဴ.စျ ုွႁချုကႏ ုွႁချမၶ
ဘကဲါ႑ႁနစဴ.စျုွႁချုကႏုွႁချါံျတ႑ႁ ုငကစျုဴ.ေငကအျ ေ.စၚ႔ုကႏ Control panel လငၶ ၫ႕ါံျ စႁုျနုအျ Regional and Languages လငၶ ၫ႕ါံျ ာ႑႔ုွႁချ ေ.စၚ႔ Languages bar လငၶ စၚ႔ုကႏ Languages bar ါံျ ့းႁုျ်ကအျ Details လငၶ ၫ႕ါံျ ါဴ.႔နုအျ Add အက႔ ိၿ.႔ Keyboard layout / IME: ါံျ စၚ႔ုကႏ နးႁႊ?ယူတျရကစျ စညျ်ူချါံျ ့းႁုျ်ကုျ ။ႁုျအတျလငၶ (မႁချနုအျ ေအငကချဘ႑႔ဆၾတျလင)
အက႔ာၢယ ါဴ.႔ရက႔နုအျ Alpha Keyboard လငၶ အက႔ာၢယ OK ၫ႕ါံျာ႑႔ုွႁချ အက႔ိံျေငကအျာၢယေ. Apply ာ.ညျမၶ
စဥကနုဴ.ညျဘကဲ၎ႁ အက႔ိံျေငကအျာၢယ စၚ႔ုကႏ ာကုျနု.ညျဘဟဉအ.စဥက ဆႉ႔ူႁုျဆၾတျ ိၿ.႔ Taskbar ါံျ ဘကဲရကစျ Keyboard ာ႑႔ာႁုျုဴၠချာိံျမၶ စၚ႔ုကႏရကစျါံျတ႑ႁ English(United State), Alpha Zawgyi ။ဓါု႕ နးႁႊ?ယူတျုကႏ ေအငကချဘ႑႔ဆၾတျါံျာိံျမၶ
ပတျစဥကစၾငုျာငုျါ႑ႁအုျူငုျာညျစၚ႔ုကႏ Word ာၢယ ႒စႁချနုအျ Alpha Keyboard အက႔ အုျာ.ညျာႁချမၶ ပတျစဥကစအငကညျ ူငုျ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျစဥကာၢယ အုျ်ကအျူတျ စၚ႔ုကႏ Word ိံျိံျ စၚ႔ုကႏ Notepad ိံျိံျအုျ်ကုျါ႑ႁမၶ အုျအက႔ိံျေငကအျာၢယ ွ.႔နုအျအက႔ စအငကညျန်ဴ.ႁ်ကအျ စၚ႔ုကႏ post ဖုကါ႑ႁမၶ ဘကဲါ႑ႁ်ကအျ အက႔ွတ႑ႁနမ.ချၶ နုဴ.ညျ်ာျမႁချေငကအျလငၶ နးႁ့႑ႁနဘဴအျနမ.ချ နႊချမၶ
posted by jawpakao at 6:19 PM
… ုဴ်နဳဟ.႔့႑ႁနဆချ
ုဘဟ၎ႁတ႑ႁ ၫ႕ ာ.ႁမၬ ဳဟဉူတျုကႏာိံျအက႔ စအငကညျႊ?ယူတျ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔ာိံျမၶ
posted by jawpakao at 7:01 PM
ူငုျစကႁာိႁုျနဳတျတ႑ႁ ုဟ.ျနဖၿ.ျေၽ. ႀိႎ ၫဤဆငြၡ (လယာုူငနူ.ညျ်သေ.) ႀ.ု?ချႊတျ နုႍချဳဟဉဖညျူတျ ညုကႏ ူုၡ.ုတင မၶ ူငုျစကႁတ႑ႁ ုဴ.နအႁ ၫႁ႑ုဴၠချ စၚ႔ုကႏဆဴရငကအျ ဆဴစအျ ာညျစဥကန”အႁန့ချမၶ ၫ႕ါံျာ႑႔ုွႁချ ၫ႕ုကႏ ုဟ.ျနဖၿ.ျေၽ.ဆငြၡ ဳဟဉနုံျနုအျ ညဘကဲူငုျ ုတငူုၡ.စၚ႔ ဆုႉမ.ဖျ ၁၃ ၄၉ ါံျာိံျအက႔ အုျ“အယစဤငုျူတျ ညူငုျေကစျ ူငဳျာိႁုျနဳတျ ေူညျစဋာမၶ ူငုျတ႑ႁန္ုျနုဴႁုဴုျေငကအျအက႔ စၚ႔ုကႏ ဆၿ.ႁ ၁၃၆၂ ၫ႕ုကႏနွချူငုျာငနလ.ေျ နုႍချအုျစဤငုျူတျ ေူညျိကအငပ ာိံျမၶ
ုဟ.ျနဖၿ.ျေၽ.တ႑ႁ စၾငုျာငုျါ႑ႁူငုျါု႕ါ႑ႁနဖၿ.ျနာ.တျၵ ူငုျါု႕ဖုက လႁချ့႑ႁါ႑ႁနုဴႁုဴုျ ါ႑ႁနဆံျ။ုျာႁချ စၚ႔ုကႏ ေ“ု.နု.ညျါု႕စဥကအႁုကဲအက႔ ူငုျန”အႁ“အ့ျ ၫ႕ဆဴစအျာညျါာဴငၠချ ါငကချုစံျစအငအျအက႔ ဆ႑ုျနု.ညျါု႕စဥကအႁါ႑ႁဘံျနူ.႔ဆ႑.ါ႑ႁုဴငၠ့ျနူ.႔ဆ႑႑.ာ.ညျါံျ ဳဟဉဖညျုဴၠချ ညုတငူုၡ.ၵ စအငအျုဴၠချ ူငုျုၿစျာိံျအက႔ နု.ညျါု႕ ေူကႁမ.ာလာ႑႔ ဆ႑ုျါ႑ႁအဲနုအျာ.ညျုကဲ ူာငချူလ.အျ ဘ့ကဆကအာညျစဥက ေဳငချနအႁ ဘကဲူကႏ ဆနုုျဆႉ.ုကဲၵ ဘကဲ ူာငချူလ.အျ ဘ့ကဆကအ ါဴငၠချ ဘကဲာညျစဥကေဳငချနအႁ စၚ႔ုကႏ ါု႕စဥကာညျူၾၠ့ျ၎ႁနူတျ လႁချါ႑ႁုအကႏိံျာ.ညျုကဲ အက႔စဴညျ ဘကဲေၽ.ုတင ေၽ.ဳဟဉူငုျစဥကာညျအာဴ.နအႁ ဳဟဉဖညျုဴၠချူတျ းငၠုျနစချုကႏ ရျံူငုျစအျာ႑႔ုကဲါံျ ႊ?ယူတျ ဆုျဆႈ ညုကႏ ူငုျေကစျ၎ႁာ႑႔မၶ
စၚ႔ုကႏ ူငုျေကစျတ႑ႁ စကႁာိႁုျနဳတျ စၨူတျ ေဳညျ ၫႁ႑ (၇)ဳညျာိံျမၶ ေဳ၎ျာစဓူကစျအႁါာဴငၠချါံျ ်ၫ႕ာိႁုျနဳတျ ဆဴ.႔ုဴၠချ ိကႏုကႏ ာိႁုျနဳတျ ုနမုျဘကချနု.ညျခဃ.ျစဓူကစျာႁချစၚ႔ုကႏ ူငုျေကစျာိံျမၶ
ညုကႏ အချမႁချအၾႁ ေ႔နုဴ.ညျူတျ ႀႋႁုျူၾၠ့ျ၎ႁ ဆ႑ုျါ႑ႁစအငကညျေ. ူငုျန“အႁ“အ့ျုကဲၵ စကႁေ.ါကဲုကဲ မညျအၾႁူတျုကဲနူတျ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ါ႑ႁေဳငချနေ.ညျုကဲၵ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ိယနုဴ.ညျာႁချုနာဴ.ညျ ့ါဟငၠချဘကချါၿသ ၫႁ႑ာႁချ၎ဲါံျုကဲမ ဘ႑႔“အယ ့႑ႁါ႑ႁစအငကညျႊ?ယ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔၎ႁါံျ ဆဴယေနဳဓချ ာ.ညျေငကအျန၎ဓတျ နႊချနုအျမၶ ူငုျေကစျါံျ ါငကချနိစျူတျ စၚ႔ုကႏ ဖနမချေ႔ာိံျမၶ ိံျာ.ညျာၢယ ာငုျါ႑ႁစအငကညျူတျ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျုကဲမၶ ွါယ ေဳငချဆဴယါဴငၠချချ ါ႑ႁုဴၠချစၚ႔ုနာဴ.ညျေ႔ာၢယ လႁချါ႑ႁစအငကညျႊ?ယုကႏာ.ညျါံျ ါ်.ညျေ.နမ.ချၶ
posted by jawpakao at 11:52 AM
ဘကဲါ႑ႁဳဟဉစအငကညျ font ာညျစၚ႔ Blog
စၚ႔ုကႏ ၫ႕ုနညႁနအႁ ေဳငချဳဟဉာႁချ ါံျ ဆ႑ုျါ႑ႁစအငကညျ font ိယစအငကညျဘကဲူကႏါံျ စအငကညျ့႑ႁနူစျဳဟဉူတျမၶ ေဳငချဳဟဉာႁချါံျ စအငကညျူတျ့႑ႁါ႑ႁ၎ဲနု႑ႁနု႑ႁမၶ ။ငကအျမဳဟဉူတျေအငကချါံျုဴ.နူတျ အဃ႔ဆတျ ။ငကအျ (၈ယ၀၀) ၏စချာံ ုနူချ်ာျမႁချ ဆ႑ုျါ႑ႁစအငကညျ font ါံျ စအငကညျါ႑ႁေ.ာိံျမၶ ူၾၠ့ျါ႑ႁွကႏစၚ႔ာကုျူငုျေ႔ ်ကအျူတျ စၚ႔ ဆႉ႔ါံျ ာိံျမၶ Font ၎ႁါံျ စအငကညျူတျ ုကႏ zip file ာိံျမၶ မ႔ဆကချန်.႔ ဘ႑႔ာါဴငၠချါံျ ဘကဲူကႏါ႑ႁအႁချန္ဟႁ ါံျ ဘ႑႔ာါဴငၠချါံျအဲာႁချ္ေငကအျါဴငၠချါံျမ ဆ႑ုျါ႑ႁဳဟဉ ါဴငချချါံျ ့႑ႁာ႑႔မၶ
အဃ႔၎ႁ ဆ႑ုျါ႑ႁဳဟဉေ. ေွုျၫ႕ုနညႁနအႁါံျမ ွုျအက႔ ဳဟဉေ. ဘကဲါ႑ႁစအငကညျ post စၚ႔ blog ာ႑႔ေဳညျနး.အျစဴညျၶ ုဴ.့႑ႁါ႑ႁဳဟဉ ၎ႁ ာငုျါ႑ႁ့ကဲာ႑႔ါံျ ေ႔၎ႁါံျ ိံျလယူဃအျ ာ႑႔န့ချမၶ နဒႁဖုကနူစျူတျအႁါံျ စၾငုျာငုျါ႑ႁုကႏနု.ညျါု႕စဥက ူဃအျနုအျုကဲါံျမ ဳဟဉစအငကညျူတျ ူငုျအႁ၎ႁာိံျမၶ ့ငကအျါံျမ ဘကဲါ႑ႁနုဴ.ညျ ႀႋႁုျ ိယနုဴ.ညျဘကဲူကႏါံျ ာ႑႔ေဳညျအက႔ာ႑႔ေဳညျ စအငကညျႊ?ယ၎ဓုကႏာိံျမၶ
ဘ႑႔ုကစျုဴ. ပတျစဥကာငုျါ႑ႁနုဴ.ညျ ႀႋႁုျာ႑႔ာၢယ စဥကိယစႁုျာကုျူငုျ ဖုကစငကချ႒စႈ ာ႑႔မၶ ဘကဲါ႑ႁစႁုျာကုျူငုျဖုကါံျ ုကငစျုဴ.ေငကအျ ိယူကစျဘနစချအချညချျ စၚ႔ုကႏ www.blogspot.com အက႔ Singup ူတျအက႔ာၢယ နးႁိံျုဴၠချာကုျူငုျဖုကာ႑႔ာိံျမၶ ိံျုဴၠချာကုျူငုျအက႔ာၢယ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျါအေငကအျါံျ ူကစျစၚ႔ Layout လငၶ စၚ႔ Layout ါံျ ႊစျူကစျ စၚ႔ Edi HTML ါံျစဴညျလငၶ စၚ႔၎ႁ ်ငကစျုဴၠချာၢယ ိယစနူတျ Code ိယဘနစချ Code အက႔ာံ ူငုျဖုက ာငုျါ႑ႁအုျာငုျါ႑ႁစအငကညျါံျ နးႁာႁုျစၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျဖုကမၶ ဘကဲါ႑ႁိယစနူတျါံျ မႁချန်ံျေ. ်ငကစျ စၚ႔ုၚငၠစျူငုျ ါံျာၢယ Variable definitions ိၿ.႔့ကဲူတျ font အႁါံျ ိယဘနစချ်ကုျ "newmon", ာိံျမၶ
စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔ာၢယ ေ႔နုႍချစနူတျူတျ ဘကဲဆၾတျါံျ ာိံျမၶ
type="color" default="#ffffff" / value="#ffffff">
type="color" default="#000000" / value="#215670">
type="color" default="#ff4500" / value="#38B63C">
type="color" default="#fffafa"/ value="#38b6a8">
type="color" default="#ffebcd" / value="#ffebcd">
type="color" default="#9e5205" / value="#9e5205">
type="color" default="#777777" / value="#1B703A">
type="color" default="#555555" / value="#9D1961">
type="color" default="#eeeeee" / value="#eeeeee">
type="color" default="#444444" / value="#444444">
type="color" default="#de7008" / value="#8e00ff">
type="color" default="#e0ad12" / value="#e0ad12">
type="color" default="#ff4500" / value="#660700">
type="color" default="#999999" / value="#341473">
description="Sidebar Visited Link Color"
type="color" default="#de7008" / value="#807d7d">
type="font" default="normal normal 90% 'newmon',Trebuchet MS, Trebuchet,Arial, Verdana, Sans-Serif" / value="normal normal 90% 'newmon',Trebuchet MS, Trebuchet,Arial, Verdana, Sans-Serif">
type="font" default="normal bold 266% 'newmon',Arial,Verdana, Sans-Serif" / value="normal bold 266% 'newmon',Arial,Verdana, Sans-Serif">
type="font" default="normal bold 85% 'newmon',Arial,Verdana, Sans-Serif" / value="normal bold 85% 'newmon',Arial,Verdana, Sans-Serif">
type="font" default="normal bold 110% 'newmon',Arial,Verdana, Sans-serif" value="normal bold 110% 'newmon',Arial,Verdana, Sans-serif">
type="font" default="normal bold 125% 'newmon',Arial,Verdana, Sans-Serif" / value="normal bold 125% 'newmon',Arial,Verdana, Sans-Serif">
ဘကဲူဤဉါံျ ပတျာူငုျဖုကအုျူတျအႁါံျ ့႑ႁိံျာႁုျစၚ႔ာကုျူငုျ၎ဲာၢယ နုႍချေ. စၚ႔ Setting အက႔ နုႍချူကစျ စၚ႔ Formatting လငၶ စၚ႔ Post Template ါံျ အုျ်ကအျ ူငုျ လငၶ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျေ႔၎ႁ ဘကဲ့ကဲုဴၠချ ုဴ.နအႁါံျမ ေ႔စအငကညျူတျ ုကႏ font "newmon" ာိံျအက႔ ိယ်ကအျူတျ "newmon" ာိံျမၶ ပတျဖုက အုျ font အၿ့ျ့ျာၢယ ိၿ. "newmon" ါံျ စနူတျ်ကအျစၾငုျဖုကစအငကညျူတျ font ါံျလငၶ ွါယ ိယိံျ font unicode နမ.ချၶ
အက႔စဴညျ ာကုျူငုျဖုက ါ႑ႁာႁုျစၚ႔ုကႏ လယအၿ့ျာ.ညျါံျ ဖုက အုျူတျအႁါံျ ိယစအငကညျူတျ ာၢယ နးႁာႁုျုဴယနမ.ချ ၫ႕ုကႏလယ နုဴ.ညျႀႋႁုျဘ႑႔ာါဴငၠချ ့ကဲုဴၠချူတျမၶ ဘကဲါ႑ႁဘအငကညျ ါံျ ညုကႏေ႔့႑ႁဳဟဉမၶ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျႀႋႁုျဘၾ. ါံျ ဘကဲါ႑ႁစအငကညျ ါံျ ဳဟဉႊ?ယူတျ နစချချ ါ႑ႁွကႏနုအျူတျမၶ ညုကႏာကုျူငုျေ႔နူတျ ေအငကချ နးႁန်ၿ.ညျႊ?ယူတျမ နုဴ.ညျဘုျူတျာိံျမၶ အဃ႔၎ႁ စနမချနုဴ.ညျ ႀႋႁုျ ။ငကအျ၎ႁနိႁဓူတျ ာ႑႔ူ်ကုျုဴ.မၶ အဃ႔ူုႉမသ ါ႑ႁေဳငချာံ ွုျဳဟဉေ.စဴညျနမ.ချၶ
posted by jawpakao at 10:53 AM
စဥကါု႕ာညျ ……………… လႁချမသနု.ညျုဴချ ……………… “ဆချဘချနမ.ာ႑႔
နုဴႁေငကအျရငက့ျအဃ႔ …… လယာ႑႔နမ.လ.အျ ………………… ဆာဃ.အျုဴုျုႁ
လႁချဆ႑ယနူႎ.တျ။ႈ …… ့ႈေ.ုဴၠချမ …………………… တငစဓုုႁ
ာကုကဆငကူျဳၿႁ …………… ုႁေအငအျာညျ ………………… နး.အျ်ငကအျနူ.ညျအ႔ၶ
ိယိကချာႁချႀ႔ …………… ဆၾတျအ႔လယအၿ့ျ ……………… ိံျအငမ်ႇ.ညျ
အကစျလႁချုဴၠႏု႑.ညျ …… ု႑.ျး.ညျလယဳဟ့ျ ……………… ုႈ၏ါ့ျလယအုျ
။ဓုဴႁဆၿ.ႁ၏စချ ………… စဥကိယ“ုချာႁချ …………………… လႁချုကႏးငုျစဴုျ
လယါံျအႁချဆ႑ုျ ……… ါ႑ႁနွညျွုျေ. …………… ဆငချဆ.အက႔“ု.ညျၶ
ါ႑ႁစစီဓညျ ……………… ဋ.ညျူကႏါ႑ႁါဴ.႔ …………………… ိၿ.႔ူကႏါ႑ႁဳဟစျ
ူဏအငုျုၿစျ ………… စဤငအျုဆစျလင ………………… ပ႑ႁာငာာညျ
ပတျမတငတငချ …………… ႀငချႀချ့ငကအျာ.႔ …………… ေ.႔စဥကနုဴႁဘႎညျ
်ငကအျူဏုၚညျ …………… ုၾညျဳဟစျလငမ ………………… ူဏေငကအျုဆစျၶ
စဥကာညျုဤၠႏဳဟစျ …………… ုဆစျနဖၿ.ျ႒စ႔ ………………… ူံ႔ူယနဖၿ.ျဆဴၠချ
လင့႑ႁိယခဃၠချ …………… ်ဆကချအဆငကုျ ……………… းငၠုျတတျဘဴယႀ႔
စဥကာညျါာဴငၠချ …………… ရငကချချဆဗႈဆဗႈ …………………… လႈဆ.ါဴ.႔ည႔
ဘညျုေျအႁချအ႔ ……… လယေ႔အုျုၚငၠစျ …………… ်ငကစျနဳအျါ႑ႁးၠချၶ
ုဘဟူုၡ.၎ႁါံျ လယါံျာ႑႔ိံျလယဳဟဉး.ႁာ႑႔့႑ႁအဲုဴယမၶ စၚ႔ုကႏ ူငုျာ႕၎ႁနူတျ ့႑ႁႊၾႁုျူတျ လယဳဟဉမၶ ။ငကအျမ ိံျုဘဟူုၡ.န“အႁာ႑႔ ့႑ႁနဆချုကဲနူတျ ွကႏိယူုၡ. (တ)ါငက၎ျ ၎ႁအက႔ စၚ႔်ငကအျေ႔ ာငုျါ႑ႁစအငကညျႊ?ယူတျ နႊုျုကဲ နႊချနုအျအက႔ အုျစအငကညျ်ကအျူတျ စၚ႔ာကုျူငုျ၎ႁာိံျမၶ ူုၡ.တ႑ႁ ဘံျနုအျူတျ စၚ႔ုကႏ ူငုျဘ႑့ျာညျအၾင (အညျနဖၿ.ျ)ၵ ါနု.ႁု႑အျနဘဤ.ညျ ူငုျစအျႀ.ဆ.ာညျၵ ေူကႁစ႑ငၠချးၠချစႁချ ာိံျအက႔ ေအငကချ ူငုျာ႕လယ ဳဟဉူတျန့ချ နုႍချစအငကညျႊ?ယူတျ မၶ
posted by jawpakao at 6:53 PM
ဘကဲဆကချန်.႔ူတျ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔ Font ုကႏ Keyboard
အဃ႔၎ႁ ဘကဲ၏စချ ေ႔နုဴ.ညျုဴၠချူတျ ာကုျူငုျေ႔၎ႁ ဘကဲ၏စချူကႏါံျ ဳဟဉစနု.ႁူတျလငလအက႔ စအငကညျႊ?ယ၎ဓုကႏာိံျမၶ ာကုျူငုျေ႔နုဴ.ညျူတျူၾၠ့ျ၎ႁါံျ အုျူတျုကႏ ာူငုျ newmon ာိံျမၶ ာူငုျ newmon ၎ႁါံျစဴညျ အႁချန္ဟႁူတျ ၫ႕ုကႏာကုျူငုျ ါနု.ႁစရငကချုသတသ ာိံျမၶ ူၾၠ့ျညုကႏါနု.ႁစရငကချုသတသ နုႍချစအငကညျူတျ ညုကႏ font အၿ့ျ့ျစဴညျါံျမ font ၎ႁါံျ နုအျ့႑ႁါ႑ႁမၶ ညုကႏာကုျူငုျေ႔၎ႁ ဘကဲူကႏါ႑ႁစအငကညျ font ါံျ ့႑ႁအဲူတျါံျမ ။ငကအျဳဟဉစလၠချႊ?ယုကႏန့ချမ စာ.ညျမၶ ပတျမ႔စအငကညျ်ကအျနူစျ စလၠချႊ?ုကႏာ.ညျာၢယ အချါက၎ျနဖၿ.ျုကႏ၏ိ့အျမၶ ူၾၠ့ျ။ငကအျမ ါ်.ညျစအငကညျာႁချ font ုကဲနူတျ ့႑ႁိံျ၎ဲမၶ ပတျာငုျါ႑ႁါ႑ႁ font newmon ာၢယ နုအျေွုျာ.ညျာႁချမၶ ညုကႏ Email န့ချမ စူႁချုကႏါ႑ႁမၶ
အက႔စဴညျ ဘကဲါ႑ႁအုျူငုျ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔ါံျစဴညျါံျ ့ငကအျၫ႕ိံျာႁချ font unicode ါံျမ ိယဆကချန်.႔ keyboard အၿ့ျ၏ဳ.ာ႑႔မၶ စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျနေညျအ.ညုျ ုသတသအႁၵ ဆၿႁချအငကချအႁ ာကုျူငုျာညျ အၿ့ျ့ျအႁါံျ အုျာႁချူငုျၵ စအငကညျာႁချူငုျါံျ ညုကႏ keyboard ူကႏါံျ ့႑ႁအဲမၶ ညုကႏ ာကုျူငုျေ႔၎ႁါံျနအံျ အုျာႁချူငုျ keyboard ါံျ Alpha Keyboard ာိံျမၶ Alpha keyboard ါံျစဴညျ နုအျန္ဟႁၫ႕ ာကုျူငုျနေညျအ.နညအျ ဘၾ.ာ႑႔ www.alpha.com.mm ာိံျမၶ font ာညျ newmon ုကႏ keyboard ၎ႁ အုျူငုျ နးႁအကစျုကႏ Font A1Mon ါဴငၠချါံျမ ညုကႏာကုျူငုျေ႔၎ႁ ဆကချန်.႔ုဴၠချ Alphakeyboard ၎ႁုကႏ font newmon ၎ႁ ိံျုကဲမၶ
ာကုျူငုျူၾၠ့ျ၎ႁ ။ငကအျမ ္ညျဘိံျုဴၠချူတျ ညေူကႏဖုကုကဲနူတျ ါ႑ႁိံျာကုျူငုျာ.ညျါံျ အႁချနုအျ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျလယအၿ့ျ ဆကဲ္ေငကအျမၶ ေဳငချေ႔အႁချနုအျူတျအႁ၎ႁါံျ လယူကႏ ာ႑႔ာံနူတျ ့႑ႁနုချေ.အျူတျ ေနဳဓချအဴလယာနုဴ.ညျူတျါံျေငကအျမၶ ာ႑႔စဴညျါံျ ါ႑ႁနူ.႔နူ.႔ ါ႑ႁဆၾယဆၾယါံျမ အႁချနုအျ ဆကချန်.႔ူတျ်ာျါံျ နးႁိံျုဴၠချနူတျ စဓာ႑႔ဆ.ျုကဲမၶ ာ႑႔စဴညျါံျ ညေူကႏဖုက ္ညျဘိံျအက႔ နုဴ.ညျနအံျါ႑ႁနည.တျ အဲာႁချွ။ငကအျါံျန့ချါံျမ ေဳငချါ႑ႁေ.အျ ေနဳဓချါံျ ဳဟစျ့႑ႁါ႑ႁၶ
မ႔နုဴ.ညျူတျ font ုကဲ keyboard ုကဲါံျ ။ငကအျမ ့႑ႁါ႑ႁေ.အျူတျ ေနဳဓချ ညုကႏစ႕ါကႏနွချ်စျါံျမ ူၾၠ့ျ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျေ႔၎ႁူၾၠ့ျ ေ.အျ၎ဓုက အဴလယာနုဴ.ညျူတျါာဴငၠချမၶ ုကအဴ လယာနုဴ.ညျူတျါာဴငၠချနူတျ ုကႏဆကချန်.႔န့ချ ူတျ်ငကအျမၶ ုကလယာနုဴ.ညျူတျ font ာညျ Unicode ူၾၠ့ျ၎ႁအချါက၎ျအသ ဘ႑႔ာနူ.ညျမၶ လယါံျနုဴ.ညျး.ႁါံျ ့႑ႁအဲုကဲနူတျ ူုႉမသ ာညျစဥကါ႑ႁဆကချန်.႔ဆဴ႔ဆဴ႔ူယူယာ.ညျ ုကႏါ႑ႁနုဴ.ညျုကႏါဴငၠချချာ.ညျလငါံျ ဘအငကုျ္နေ.တျ၎ဓ ညုကႏူငုျ၎ႁာ႑႔စငကအျနး.အျမၶ
အက႔စဴညျ ာကုျူငုျ၎ႁ ါ႑ႁစအငကညျါ႑ႁါံျ စအငကညျၫ႕ စအငကညျူတျ စၚ႔ firefox ာိံျမၶ စအငကညျနုအျ စၚ႔ုကႏ IP ါံျ ့႑ႁါ႑ႁ့႑ႁနဆချၵ ါ႑ႁာႁချမၶ ညုကႏာကုျူငုျေ႔ါံျ စၚ႔ Computer ေ႔မစျာႁချူၾၠ့ျ၎ႁ ပတျစအငကညျစၚ႔ုကႏ IP ာၢယ ာူငုျာညျ်ကချချ့႑ႁာႁုျမၶ စၚ႔ုကႏ firefox ာၢယ ာႁုျဆကဲ္ေငကအျမၶ ပတျဘံျနုအျ ာကုျူငုျႀႋႁုျါံျစဴညျနူတျ စၚ႔ုကႏ firefox ါံျ ာႁုျုဴယမၶ ့ငကအျါံျမ ာကုျူငုျေ႔ါံျ ိယစအငကညျစၚ႔ုကႏ firefox ာိံျမၶ firefox ါံျ ။ငကအျမ Program န“အႁာ႑႔ နးႁိံျုကဲနူတျ ါ႑ႁစအငကညျူငုျုကဲ ဆ႑ုျါ႑ႁနုဴ.ညျာကုျူငုျ ႀႋႁုျုကဲါံျ ိယမယ“ဆညျေငကအျမ နႊချနုအျမၶ ပတျဆကချန်.႔ ာၢယ စလၠချႊ?ယူတျုကႏမၶ နုအျန္ဟႁ စၚ႔ာကုျူငုျ www.mgyoe.blogspot.com ါံျုကဲ www.nyilynnseck.blogspot.com ါံျုကဲ နုအျဆကချန်.႔ါ႑ႁမနမ.ချၶ အဃ႔၎ႁ ဳဟဉါ႑ႁူတျ ။ငကအျ၎ႁမအက႔ စအငကညျႊ?ယူတျစၚ႔ုကႏာကုျူငုျေ႔ ။ငကအျ၎ႁ နုအျုဴ.မၶ အဃ႔ူုႉမသ ါ႑ႁေဳငချာၢယ ွုျအက႔ စအငကညျႊ?ယုကႏစဴညျနမ.ချေသၶ
posted by jawpakao at 12:37 PM
ူုၡ.မ.ဖ.၀ချာညျ းၠချဆီကဲ ဘ႑႔ဳနာၿ.ညျ
ာဆကညျန်ံ.ျး.ႁ ……………… ူၾင့ျဆၿ.ႁေဳဓ ……………… ုဴ.ုဟ.ျ့႑ႁိံျ
းၠချာညျိပံျ ………………… ိံျုကငစျုဴ.စၴၠချ ………………… ၫႁ႑းၠချာ႑႔မ
ာိံျဳညျူ႑. ……………………မယမ.ာလ …………………… ုမၫၩု
ါယပာကမ …………………… စဴဆကႀငၫၩ ……… ……………… ညါမ၏ာ့ျၶ
စၚ႔ု.ူါံျ ………………… ဳဓဘံျဳဟစျ၏ါချ …………………… မ.ဖ.၀ချမ
းၠချတ႑ႁာ႕ူ ………………… အငအျစဆၾငချါဟ ………………… အငၧမ.ဖ.
ႀႁကါၿုဟ.ျ်င ………………… ဆငမႈုစဏဓ ……………………… နိတႈည.ာ.
စၚ႔ဆအဤႁုဴ. ………………… နာအဤ.ဘဟ.စျုၚချ …………… စႉချမချညညျ၏ာၶ
ဆၾငချမ.ာလ …………………အငၧီာႂ …………………… ဆႈ့မ.ဖ.
”ုသတ႑ႁာ႑႔တဓ …………………… နအၿ.တျမ.ဖ.စၴၠချ …………… စၾငချးၠချတ႑ႁမ
ၫႁ႑နိဓတျးၠချ၎ႁ ……………… “အချအၾႁႊတျါကႏ ……………… ေငညျွကႏအက႔စဴ
ေငညျဳကအျစဴညျမ ……………… ဆကတၼႀႁက ………………… ၫႁ႑ဆငိႌငု.ၶ
ာ႑႔ည႔ွအဤတျ ……………………ဆၾငချီမျာ႑႔ပၾၠ ………………… ါယဆကီာႂ
စၾငချးၠချတ႑ႁမ ……………………နွ.ႁာဆအျ“ုၠချ ………… ာချာ႑႔ီမျၫႁ႑
ဆကီာႁ်င …………………… “ုသတ႑ႁစအျူကဲ ………………… ဆကီကဲုဴၠချိံျ
ၫ႕ဆကီကဲါံျ ………………………ပာကိံျုဴၠချ ………………… းၠချဆီကဲမၶ
ဆၾငချာညျ႒စ႔ုၚချ ……………… ႊႁုျစချဆ.ဆၿ. …………… ုငကစျုဴ.နအႁမ
ဋ.ညျာညျာ႕ူ ………………… ဆကတၼႀႁက …………………… းၠချၫႁ႑ဘ႑႔ီမျ
့ႁဆ.တအႈ ………………… ုဟ.ျ”ဆႈးၠချာညျ ………………… ္.ဆႈဘဤညျူတျ
စအဤာောၦတျ ………………… အာၴတျာႁချစဴညျ …………………… နအၿ.တျာညျတႁဆၶ
ၫ႕စဋာ ……………………… ဆကတၼႀကႁ …………………… ၫႁ႑ီမျုဟ.ျ”အ႔
ဳာႈာညျ႒စ႔ …………………… စၚ႔စငဍုအျ …………………… ၏စ.ုအျာႁချေကႏ
ိကႏးၠချူုၡ. …………………ဆ.ဆည.ါံျ …………………… ၏ာ့ျါကႏူ့ကႏ
ဳၿႁ၏စုကင့ျေကႏ …………………ူဃၠႏအငအျ႒ါငၠစျုၚချ …………… ီကအချာချာ႑႔ၶ
နါဓ်မါႁဓ …………………… းၠချဘု.ႁ်င …………………… ေမငာိႎညျ
(ွစိ)စဴညျ………………… စဤညျဆိႌနာႂ. ………………… နဖ.အငစဓူ
၏စုငက့ျဆကအဤ ………………ညငနိႎဆုကဲ …………………… ဆကဲဆနဳၡစ
ာစဤႁတ႑ႁမ ………………………ေ.်.အဴာညျ ………………… ဳၿႁနုဴ.ညျူတျစဴညျၶ
ပ႑ႁာညျါာဴငၠချ ………………… စရငကချာညျအၿႁ ………………… ၫ႕အႁတဓိင
ေ.်.ာညျါင …………………ဆငိႌငလ.၎ျဳငက့ျ …………… ၏စုငက့ျဳၿႁေ.
ာ့.ညၫႎ …………………… ဳၿႁ၏စုငက့ျတ႑ႁ ………………… ာီကဍႈု.
မယးၠချ့ႁဆ. ……………… ာံ.မ.ဖ.တချ ……………… ဘံျ၏ါချမႁချလငၶ
ူုၡ. (တ)ါငက၎ျ၎ႁါံျ ဆႉေျမ႔နုဴ.ညျုနာဴ.ညျအကစျ ၫ႕အႁချ၏စချာ႑႔ ါဴငၠုျါဴ.႔ူတျအက႔ နုႍချဳဟဉူတျနမ.ချၶ
posted by jawpakao at 11:30 AM
စၚ႔ုကႏအဃ႔၎ႁ ၫ႕ုကႏေူကႏေဆႈစၿ.ညျ နုဴ.ညျဘိံျိႁၾချ ဆၣချဆႈုဴႈ ညေူကႏေဆႈစၿ.ညျါ႑ႁါဟငၠချ ေ. း.ျဖာဴငချာ.ညျါံျ ါ်.ညျစအက႔ိၾႁချ နစၳဆၣချဆႈုဴႈမၶ နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချအႁ ညုကႏ ဆဇငၠချနဆၿ.တျထစနိိုျစအညျးၠချ ိယိကချူဲႋ.ညျုဴၠချ ိယိကချေကစျီကစျၵ ိယိကချးၠႏးၠငုျုဴၠချ နဆၿ.တျ။ဓအက႔ုဴၠချာိံျမၶ နဆၿ.အျတျူကႏနူတျ ့႑ႁုငအျလႈၶ ့႑ႁစအက႔္ငကူျုကႏ နု.ညျးၠချေနမချအႁစက့ျၶ စၚ႔ုကႏ။ဓေူညျအက႔ုဴၠချါံျ နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချုကဲ နု.ညျလယးၠချု႑.ညျုကဲ ဆၿ.ႁဘ႑႔ာူႁူ ိယိကချိတျုဴၠချူတျႀ႔ ္ႁုျစုတျ ေနဳဓတျေမ.ာၿင့ျမၶ
ေူညျုငကစျုဴ.ါံျ စၚ႔ုကႏ ဆုႉမ.ဖျ ၁၉၄၇ ညုကႏ ူငုျုဆကုျနစညျူကချ ့ကဲုကဲနူတျ နဆၿ.တျထစနိဆဇငၠချိုျစအညျးၠချါံျ ေအငကချ စဓစၚ႔ုကႏူငုျုဆကုျါံျ့႑စဓ ွဖုျုဴၠချနဆၿ.တျအက႔ နု.ညျါု႕ နု.ညျးၠချေနမချအႁ ိယိကချူဲ်ၿ.႔ုဴၠချါံျ ာ႑႔တဓၶ မႁချနုအျနအံျ အကစျဆၾ့ျုကႏ ုၾငညျးၠချစႁချနု.ႁာ႑႔ုကဲနူတျ ညုကႏုၾငညျးၠချစႁချနု.ႁ စနတ..ႁါံျ နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချိယိကချူဲ်ၿ.႔ုဴၠချမၶ စၚ႔ုကႏ ဆၿ.ႁ ၁၉၇၄ ါံျစဴညျ ညုကႏ နဆၿ.တျေူကႏေဆႈစၿ.ညျာွူ နညတျနတညျ ဳဟဉဳၿႁၠူတျ နဆၿ.တျထစနိဆဇငၠချိုျစအညျးၠချ နဆၿ.တျ ာ႑႔နဘ.ျအက႔ ေကစျီကစျုဴၠချ ညုကႏေတကႏာ႑႔နဘ.ျ ညုကႏ ေတကႏစၿ.ညျ နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချ ေနမချအႁိယိကချုဴၠချါံျာ႑႔တဓၶ
နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချအႁနူတျ ့ငကအျၫ႕့႑ႁန်ံျ်ငကအျုကႏနဆၿ.အျတျအႁ၎ႁအက႔ နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချအႁ ူကစျုဴၠချနစၳဘဤၠငုျ ဘကဲ၏စချည.ည.ဆ.ျါံျနးႁိံျုဴၠချ ေူႁကုၾငညျးၠချာ႑႔မၶ ညုကႏနစၳဘဤငၠုျမစျူ႑့ျ ိံျုဴၠချါံျမ းၠချု႑.ညျနု.ညျးၠချေနမချအႁ ူကဲူ.ျ နုဴႁုဴုျုဴၠချနူတျ ရငက့ျူၾင့ျ့႑ႁာ.ညျမၶ ။ငကအျမ းၠချု႑.ညျူကဲူ.ျ နုဴႁုဴုျ ရငက့ျူၾင့ျ့႑ႁာ.ညျုဴ.နူတျ ညုကႏနစၳဘဤၠငုျ မစျူ႑့ျန့ချ န်ံျ်ငကအျ နုအျနစၳေႁချဖၿယာ.ညျါံျမ နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချဘ႑႔ာါဴငၠချါံျ မစျုဴၠချူ႑့ျ ဘဤၠငုျုဴၠချ ေူကႏေဆႈေကစျီကစျးၠချ စၚ႔ုကႏနဳအျေွုျုျမၶ
ူၾၠ့ျစဴညျ လႁချနဆၿ.အျေူကႏေဆႈစၿ.ညျ ါ႑ႁါဴငချာ.ညျ နုဴ.ညျဆဏာႁချဆၣချဆႈုဴႈ ုၾငညျးၠချစႁချနု.ႁစနအ.ႁာ႑႔ုဴၠချစဴညျ€ပဟၶ
ဘကဲူငုျေနမတျ ဆူငကချဆဧ.ညျာံၠချဆ.ဳႁချ ့ကဲါံျမ စၚ႔စနမချးၠချု႑.ညျ ာ႑႔တဓိယိကချူဲာၢယ ိက့ျူဤဉလယိယိကချူဲါံျ့႑ႁာ႑႔ၵ ။ဓတဓိယိကချူဲစဴညျနူတျ နႊ.ႁူတျုဴ. ိံျလယူဲါံျခဃႁုျ်ၿ.႔ၵ စငတဓနစချိယိကချူဲာၢယ ိကချူဤဉလယူဲါံျ့႑ႁာ႑႔မ ိက့ျၫႁ႑ူဤဉလယိယိကချူဲ ိက့ျူဤဉလယဘုျေ. ူုျုမသ လယူဲ်ၿ.႔အႁါံျမၶ
စ႑အႁ၎ႁါံျ တချလယလယဳဟဉမၶ စၚ႔ုကႏတချလယ လယဳဟဉ၎ႁ နု.ညျါု႕ူကႏ့႑ႁ့ကဲ တချဳငက့ျါံျဳဟဉေငကအျအက႔ စၚ႔ုကႏ နု.ညျါု႕စဥကနူတျ လႁချ့႑ႁါ႑ႁိကချအ႔ နဆၿ.အျတျေူကႏေဆႈစၿ.ညျ ီဖုျိၾႁချူၾၠ့ျ၎ႁလငၶ ီဖကႏိ်ယေ.နစချချလငၶ ္ညျိယိကချူဲိၾႁချ နစချာမၫကုျုကႏစငတဓမါံျ ုကႏါ႑ႁဆအငေငကအျလငၶ စၚ႔ုကႏ ဆၣချဆႈုဴႈစၿ.ညျူၾၠ့ျ၎ႁ လယ (၇)နိႉတျ ေ႔ာ႑႔နိႉတျ ့႑ႁုမစက့ျ စၚ႔ုကႏ (၇)နိႉတျါံျ ့႑ႁစၨ၏စေျာ႑႔ဆ.ျ နဒႁနု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချအႁနးႁုကႏူတျ ာ႑႔နိႉတျါံျ ဘကဲိယစၨ၏စေျုကႏ ာ႑႔။႔ၵ ာ႑႔ာသန၎ဓတျါံျ စၚ႔နဆၿ.တျ၎ႁ စဓုဴၠချာ.ညျိၾႁချ၎ဲမၶ နစၳ၎ႁ ါံျ နု.ညျါု႕စဥကုကဲ နု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချစဥကုကဲ ိယႊ?ယ ူ်႑ႁ်ငကအျ ူလ.အျ နု.ညျါု႕လယးၠချု႑.ညျအႁနမ.ချါံျ န်ံျ်ငကအျအက႔ ုကႏ၎ဓဆအင စၚ႔ုကႏာကုျူငုျေ႔ ညုကႏူငုျ၎ႁာ႑႔စငကအျာိံျမၶ
posted by jawpakao at 8:48 AM
။ငကညျာငုျါ႑ႁ့ကဲ ာငုျါ႑ႁဳဟဉါဴငၠချချဘကဲလယအၿ့ျုကဲနူတျ ဳဟဉ့႑ႁအငအျ ဳဟစျ့႑ႁအငအျၶ ဘကဲလယအၿ့ျဳဟဉ ဖုကနူတျ ာငုျါ႑ႁဳဟဉအငကညျုကဲၶ ဘကဲလယအၿ့ျဳဟဉဘကဲဘၾ.ါံျနူတျ ဖုက့႑ႁာငုျဳဟဉၶ ညေူကႏဖုက ာငုျါ႑ႁိံျအငကညျာကုျူငုျဖုကာ႑႔ၶ ါ႑ႁညငနဆ.႔ာကုျူငုျာညျါံျစဴညျနူတျ ညုကႏ ႀႋႁုျာညျါံျ ါဴ.႔ာ႑႔့႑ႁွကႏၶ ့ငကအျၫ႕ါဴ.႔့႑ႁွကႏါံျမ ။ငကအျိံျုကႏိံျ နုဴ.ညျုဴၠချ ႀႋႁုျ၎ႁ ာိံျမၶ ့ငကအျၫ႕ာငုျါ႑ႁဳဟဉ ာငုျါ႑ႁစအငကညျႊ?ယ ညုကႏာူငုျါု႕ဖုကါံျာ႑႔ဆ.ျန့ချ ါ်.ညျနုဴ.ညျုဴၠချၶ
ူၠၾ့ျနးႁိံျုဴၠချ ညုကႏ ာကုျူငုျ ႀႋႁုျာ႑႔ါံျမ ဳဟဉ့႑ႁအငအျနူတျ လႁချါ႑ႁဳဟဉအငအျါံျ ႊစျါ်.ညျဳဟဉ၎ဓူငုျာ႑႔စငကိျနး.အျၶ
ညုကႏေ႔စဤငၠညျူတျ ာကုျူငုျ၎ႁ ါ႑ႁစ႑ငၠချ ။ငကအျ (၂၀) အဃ႔၏စချချလင၎ဲမၶ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျဖုကါံျ စၾငုျ်ငကအျဖုက ာငုျါ႑ႁစဤငၠညျါံျ စအငကညျဘုျ့႑ႁာ.ညျၶ ညုကႏ ုနစဓအျဖုကစငကချ႒စႈူတျ ့႑ႁာ႑႔ုကဲ စၚ႔ုကႏ ေဳငချဆဴယာ႑႔ူ်ကအျါံျ စဴႁချေဳငချအက႔ ိယစအငကညျုကဲါံျမ ာူငုျူဃၠႏါံျ လငနူတျ ့႑ႁါ႑ႁ်ၾအျ (Prove) ာ႑႔ဆ.ျ စအငကညျ်႑ႁူတျ စၚ႔ာကုျူငုျဖုကမၶ ူၾၠ့ျုနူချမႁချာကုျူငုျဖုကၫ႕ုကႏ စအငကညျူတျ ုကငစျုဴ.နအႁါံျာံ နဘဴအျိၾႁချၫႁ႑အၾ.့ူငကချၵ ။ငကအျနုႍချွကႏနဘဴအျိၾႁချါံျ ေအငကချနဘဴအျါံျမ ်႑ႁူတျ ်ၾအျဆာဤဲ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျဖုကမၶ ေအငကချဖုကစအငကညျူတျ ူငုျူဃၠႏါံျ ဖုကနုႍချဘံျ လငဘံျ့႑ႁေ.ၶ ု.မညျနးႁနူတျ့႑ႁန်ံျါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျမၶ ့ငကအျါံျမ မ႔ဘံျိယာကုျူငုျေ႔၎ႁ ်႑ႁ်ငကအျါဴငချချအက႔ ဘံျ၎ဓာကုျူငုျေ႔ါံျ အချါက၎ျမၶ
ဘကဲ့ကဲါံျမ ေအငကချဖုကာငုျါ႑ႁဳဟဉ လႁချါ႑ႁဳဟဉစအငကညျႊ?ယုကႏ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျေ႔၎ႁာ.ညျါံျ နါဴႁနုအျ ုႁုျၫကုျနုအျ ူငုျနု.ညျါု႕စဥက ုကဲ ူငုျည.ည. စအငအျိၾႁချအႁါံျုကဲအက႔ စအငကညျ၎ဓ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔၎ႁစဴညျန၎ဓတျၶ
ေနမတျ ုၚငၠစျဆႉငၠစျာညျ ါနု.ႁာညျိႈာငကုနမတျ႒ဖႈ ည.႔ခဃဥၠအကချ နုချ့ကဲူတျ စၚ႔ုကႏ နစၳနု.ႁီရကဲ ွကႏါဘဆႈုဴႈ ါနု.ႁ UNLD ုကႏ ါနု.ႁ NLD အႁ စၚ႔်ၾအျအဃ႔ (၁၅ ၊၇ ၊၈၉) ါံျ ုႁုျၫကုျနုအျေနမတျလယ နုချ့ကဲုဴၠချါံျ…
မႁချနုအျ စၚ႔တချဘၾ.ေွုျုျ နဳအျေညတျမႊ.ၵ နဳအျဘနမေျညႁချၵ နဳအျေႁချနဖပဟ ာၢယ ညုကႏ၏ိ့အျူ႑့ျူုျညုျန့ချ နုအျာ.ညျုဴၠချ ့ကဲိၾႁချ ်ညျိုျစနု.ႁုဴၠချုၾငညျးၠချနမ.ချါံျ စၚ႔ုကႏူငုျတချဘၾ. ါ႑ႁွကႏိၾႁချၵ လယဳဟဉတချဘၾ.ါာဴငၠချနူတျ ဳဟဉုဴၠချေအငကချါံျမၶ တချအႁ၎ႁါံျ ဆ႑ုျါု႕ဘၾ.အႁ း.ႁနအံျး.ႁေ.န၎ဓတျၵ ဆ႑ုျနု.ညျါု႕နု.ညျးၠချေနမချစဥကအႁ ိကချအ႔့႑ႁာ.ညျမၶ ာက့ငကအျနမ.ာၢယ စၚ႔ုကႏေဳငချနအႁ ူဤဉးၠချဆနမုျါံျ ုၾငညျးၠချဘၾ.ၫႁ႑မၶ ဆၾတျးၠချဆမုျါံျ ုၾငညျးၠချမယာလၫႁ႑ုဴၠချမၶ ူုျစၨစူငကအျုၾငၠညျးၠချ၎ႁစဴညျာၢယ းၠချမနဳချ ၫႁ႑ုဴၠချမၶ ညုကႏးၠချအႁ၎ႁ ်ညျိုျစနု.ႁနုအျ့ကဲါံျ ဘကဲဘကႏဳဟၠုျေႁချဆ.ညျနုဴ.ညျုဴၠချ ညုကႏ်ညျိုျနုအျ ွကႏါဘဆႈုဴႈနုအျ့႑ႁနဆချၵ ်ညျိုျနုအျ ညုကႏ၏ိ့အျနစၳဘအငကုျါံျမ းၠချအႁ၎ႁ အညျ“ုညျ့႑ႁာ.ညျၶ ာ႑႔ေဳငချ့႑ႁနဆချာ႑႔ေဳငချ ညုကႏနု.ညျါု႕စဥက နးႁနုႍချါ႑ႁနစၳေႁချဖၿယန့ချမၶ စၚ႔ုကႏူုျႊုျေါၡူငုျူကစျုဴၠချ ုၾငညျးၠချစဥကာံ စနမချစဴညျါအယနု.ညျးၠချေနမချါံျနးႁနိႁဓုဴၠချၶ ပတျ့႑ႁနဆချာၢယ စဴညျါအယါံျ နးႁွုျူကစျိၾႁချါံျမၶ နဳအျေညတျမႊ.နူတျ ူကဲူ.ျုဴၠချမၵ နဳအျဘနမအျညႁချနူတျ နုဴႁဳၿချ ေငကအျေ.မၶ ေဳငချနအႁ နု.ညျါု႕စဥကာညျအႁၵ မနဳချအႁၵ နဆႁအႁ ူကစျဘအငကုျးၠချေတာၢယ ဘၾ.အႁ့ကဲုဴၠချ လယဆဴ႔အငၵ ဘကဲေူကႏဆႈစၿ.ညျ့ကဲူၾၠ့ျမ စၿ.ညျအႁ၎ႁါံျ စၿ.ညျီမျး.ႁ့႑ႁနဆချၵ နု.ညျလယးၠချု႑.ညျအႁနူတျ့႑ႁိကချအ႔ၶ ွါယ မႁချနုအျ ူစၨနု.ညျါု႕စဥကာၢယ စၿ.ညျ၎ႁါံျိံျနစၳစၿ.ညျး.ႁ၏စၵ ဆ႑ုျါု႕ဖုကါ႑ႁစဴယ။ယ ါု႕ဖုကမ ိယနုဴ.ညျၶ စၚ႔နဳအျစနိဆမ.ဖျါံျနူတျ ညုကႏးၠချမယဖုက ါ႑ႁဘကငညျဳငကချၵ ါု႕ဖုကါ႑ႁအညျ“ု.ညျါံျ ညုကႏဈုမ.ဖျစဥကနူတျိယဘအငကုျုဴၠချါံျ ိံျနစၳစၿ.ညျး.ႁ၏စာ႑႔ ိံျစဴညျါအယး.ႁ၏စာ႑႔န့ချမၶ
မႁချနုအျ ေနမတျေၽ.ခဃဥၠအကချဘကဲ့ကဲုဴၠချူဤဉါံျမ ါု႕စဥက ါ႑ႁအညျ“ု.ညျး.ျဖာဴငချၵ ေနဳဓချေမ.ါု႕စဥက လႁချနဆၢ.ႁုူငါ႑ႁာ.ညျါံျ ါု႕စဥက ိယူကစျနစၳစအငကုျါံျ ိယူကစျစဴညျါအယါံျ ိံျနစၳစၿ.ညျီမျး.ႁာ႑႔န့ချမၵ ိံျစဴညျါအယီမျး.ႁာ႑႔န့ချမၶ နု.ညျါု႕စဥကအၾႁလယေ႔ ုကႏါ႑ႁူကစျနုဴႁနစၳစဴညျါအယီမျး.ႁ ုၭလယုကႏလယလငၶ ိယမစျူ႑့ျာံ ိံျစဴညျါအယ့႑ႁနဆချမါံျ နု.ညျါု႕စဥက န်ံျနုအျ်ငကအျေငကအျလငၶ ူ႑့ျါံျနူတျ ့႑ႁနႊ.ႁ ုၭအၿ့ျအၿ့ျါံျနူတျ စဥကူကစျုဴၠချ နစၳဘအငကုျ စဴညျါအယဘကဲ၏စချည.ည.ာၢယ နစၳေႁချဖၿယါံျ နးႁိယုူငါ႑ႁန့ချမၶ
ဘကဲေၽ.တ႑ႁ ွ.႔နုအျူတျ စၚ႔ုကႏာကုျူငုျဆၿႁချအငကချာိံျမၶ
posted by jawpakao at 8:05 PM
ညုကႏးၠချာ႑႔ာ႑႔ၵ ါု႕ာ႑႔ာ႑႔ ွဲဖ.အငၵ ာ.ညျဖ.အင ါ႑ႁုအကႏိံျာႁချစၚ႔ါု႕ာ.ညျါံျ ညုကႏိ႑ုျနု.ညျါု႕ါံျနူတျ စဓာ႑႔ဆ.ျုကဲမၶ ိ႑ုျနု.ညျါု႕တ႑ႁ စအငကညျ်မ.႔နု.ညျါု႕ၵ ႊၾႁုျႊ?ယွဲဖ.အငာ.ညျဖ.အင နု.ညျါု႕ာ႑႔မၶ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ိ႑ုျနု.ညျါု႕အက႔ စၚ႔ုကႏ နု.ညျါု႕ဖုက နးႁိံျုဴၠချ ာ႑႔မာဧ.ချာ.ညျုကဲမၶ ့ငကအျါံျမ ိ႑ုျနု.ညျါု႕ာ႑႔ာ႑႔ ါ႑ႁုအကႏိံျ ါ႑ႁဆဏဆာဤဲါံျ ့႑ႁနူ.႔ဆ႑.မၶ စၚ႔ုကႏ ေဳငချ၎ႁ စၚ႔ုကႏနု.ညျါု႕စဥကူၾၠ့ျ ဘ႑႔ာါဴငၠချါံျ ဆကချန်.႔ုဴၠချ ညုကႏ ိ႑ုျနု.ညျါု႕ နဘ.ျးၠချာညျအၾင လယာုူငနူ.ညျ်သေ. ထုႉဋနဖၿ.ျနဘ.ျးၠချာညျအၾင ည.႔ပဥႃနုဟညျ ဳဟဉဳၿၠႁူတျ ါံျန့ချ ဆကချန်.႔ုဴၠချါဴငၠချၵ စၚ႔ေ“ု.နု.ညျါု႕စဥကုကဲ စၚ႔ုကႏ ႀ.နု.ညျါု႕စဥကုကဲါံျ ညုကႏ ိ႑ုျ၎ႁန့ချိနပံျုဴၠချ ါဴငၠချိၾႁချမၶ ွါယါံျ ိ႑ုျနု.ညျါု႕၎ႁါံျ ညုကႏ နဆၿ.တျ ညုကႏဆၣချဆႈုဴႈာ႑႔ာ႑႔ ့႑ႁနုချန္ဟႁုဴၠချ ့႑ႁနုချဆၢၠအျဆ႑.အျုဴၠချူတျ ညုကႏိ႑ုျနု.ညျါု႕ာ႑႔ုကဲနူတျ ၫ႕ုကႏနဘ.ျးၠချာညျအၾင ဆဏုဴၠချဆာဤဲအက႔ နု.ညျါု႕စဥကအႁနူတျ ိကချအ႔ ိနပံျုဴၠချ ိ႑ုျနု.ညျါု႕၎ႁါံျ ၏ာ့ျအာၴတျိၾႁချစၚ႔နု.ညျါု႕စဥက€ပဟၶ ိ႑ုျါံျတ႑ႁ ညုကႏဆအျိ႑ုျ ေအငကချဘ႑႔ဆၾတျမၶ
မယညငါကဲ မ.ဖတချ်မ.႔ၵ ဖကဖဘသူစဥကၵ စဤညျူတျုကႏွဲ စႋုျ႒စ႔ါံျ ေ.႔ုၾ.႔စဥကၵ စၚ႔်ငကအျ ဆကဲ်ရငကအျ ိယာချာ႑႔ ဘဴယ။ယနမ.ချၵ ဆ႑ုျေငကၧကဲမ.ချ ွ.႔ စၚ႔မယာလၶ
ိ႑ုျ၎ႁါံျ ။ငကအျမိံျာ႑႔စငကိျနး.အျုကဲနူတျ းငၠုျနစချုကႏရံျဆ. းငၠုျနစချုကႏ ေါၡူဆ‘ၹ၎ျိ႑ုျနု.ညျါု႕နမ.ချ ညုကႏေ႔ န်ံျနုအျ်ငကအျမၶ
ဘကဲဆအျိ႑ုျနု.ညျါု႕ူၾၠ့ျ (ိ႑ုျနု.ညျါု႕နဘ.ျးၠချာညျအၾင ) ါံျ နးႁအညျိံျုဴၠချၵ နးႁ၏စ.ုအျိၾႁချစၚ႔ုကႏေဳငချ၎ႁုကဲ စၚ႔ုကႏ ာ႑႔ေဳငချနအႁ နူတျ ိ႑ုျနု.ညျါု႕စဥက ၫႁ႑ုဴၠချာ႑႔စငကိျ၏စ.ုအျုဴၠချ ာ႑႔စငကအျုကဲမၶ ိ႑ုျါံျတ႑ႁညုကႏဆအျိ႑ုျန့ချမ ါ႑ႁွကႏနုအျ ညုကႏေဳငကုျိ႑ုျ မာဧ.ချိယ်႑ႁဘကဲူႏကါံျ ့႑ႁါ႑ႁာငချၵ ့႑ႁအဲူတျမၶ စၚ႔ုကႏ ေဳငချနအႁာၢယ ညုကႏိ႑ုျ၎ႁ ၏ာ့ျအာၴတျုဴၠချိၾႁချစၚ႔ါု႕စဥကုကဲမၶ ဆအျိ႑ုျ၎ႁါံျ ွကႏိယးငၠုျုျနစချချ စၚ႔ုကႏူငုျ ဳာႈမ.ာ.ညျ… ႀိၫဤ်ၫဤငာ.်.မ(ႀ.ုဴေျစႉသ) ဳဟဉူတျ စၚ႔ုကႏူငုျ နု.ညျန္ညျ နု.ညျဖဧချ နုက.ႁ စၚ႔ုကႏူငုျ ။ငကစျႊတျာလျ(ာညျ) ုဟ.ျနဖၿ.ျေၽ.ာံ.နႊမျစဓူငအ ဳဟဉူတျအႁါံျ ႊၾႁုျႊ?ယူတျ းငၠုျုျနစချချမၶ
ညိိံျဆအျိ႑ုျနု.ညျါု႕စဥက ေဳငချနအႁါံျ ေအငကချဘ႑႔ဆၾအျမၶ
(ုတျ့႑ႁန၏စတျ းၠချစဥကာညျနူတျ အငစဥကာညျနူတျ မယစဥကာညျနူတျ ်ငကအျလငနမ. ့႑ႁန၏စ ၂)ၵ န္ဟႁ်႑ႁူတျ်ငကအျ ူာဟၠဲိကႏေငကအျ စဥကနူတျစတငကအျ းၠချာညျၵ အငာညျၵ မယာညျ (စငကချူတျအငါံျ ၫ႑ႁုကႏညညျ ွဲမ.ဖ.ါံျ ါု႕စဥကာညျ ၂)ၵ းၠချာညျၵ အငာညျၵ မယာညျ (စဥကိယုနူချစဤညျ းၠချာညျ စဥကာညျ းၠချစဥကာညျနူတျ ါု႕စဥကာညျ းၠချာညျ စဥကာညျ … ၂) ိုျါနု.ႁစဤငၠညျဆႉငၠစျ ုတၨအငကညျရကစျ။ငကစျ ေ.ိကႏ်ကငစျ းၠချ။ငကစျစဥက့ႁဆ.…ၶ
ိ႑ုျနု.ညျါု႕ာညျ ၎ႁတ႑ႁ စၚ႔ုကႏ ်ၾအျအဃ႔ (၂၁/၉/၁၉၅၅) အုႉဆငကူျလယါာဴငၠချဆဏုဴၠချဆာဤဲမၶ ်႑ုျါံျတ႑ႁ ိကႏုကႏ ၁၉၅၇/၅၈ နးႁ၏စ.ုအျုဴၠချ စၚ႔ေ“ု.နု.ညျါု႕စဥကနမ.ချၶ
ဘကဲူကႏ ိံျုဴၠချိံျုဴၠချ ညုကႏနု.ညျါု႕စဥက လႁချါ႑ႁိံျာ႑႔နစဴ.ျ ာ႑႔မာဧ.ချာ.ညျ ညိိံျ စၚ႔ုကႏအဃ႔၎ႁ ိ႑ုျနု.ညျါု႕ဆကချန်.႔ါဴငၠချါံျန့ချ ာငုျါ႑ႁုကႏဆကချန်.႔ေ.မၶ ိ႑ုျေဳငချနအႁ ဆဏုဴၠချူတျဆာဤဲါံျနူတျ ညုကႏ်ၾအျဆာဤဲ ါ႑ႁိံျေ.ါံျမနုံျဳဟဉုဴၠချ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔န့ချနမ.ချၶ ့ငကအျာငုျါ႑ႁုကႏုနူချ ိနပံျါံျ့႑ႁနဆချမၶ ညစၚ႔တချါ႑ႁနဆံျ။ုျိၾႁချုကဲ မညျအႁၾအက႔ ုနူချႊၾႁုျႊ?ယူတျ ဆအျိ႑ုျ၎ႁနမ.ချေသၶ ညုကႏွဲဖ.အငၵ ာ.ညျဖ.အင ါ႑ႁခဃ့ျိၾႁချစၚ႔ုကႏနု.ညျါု႕စဥကာ.ညျ စအငကညျ်မ.႔ ိနပံျအသ ိ႑ုျနု.ညျါု႕စဥကေငကအျ်ငကေျၶ
posted by jawpakao at 6:26 PM
ါု႕ာညျစဥက အညျိံျုဴၠချ ာညျစငန့ချ ညုကႏေ႔ လ.အျုဴၠချိၾႁချစၚ႔ုကႏ ူငုျတချာညျါာဴငၠချမၶ ာညျစငအႁါံျ ာညျိငကချၵ ာညျိၵ ာညျလနူတျ လယနု.ျ့ကဲ လယစငကချ၏ဳ.ုဴၠချမၶ ာညျစငတ႑ႁ ာစအႁုကႏ ေနမတျအကစျ မာဧ.ချန့ချ အၿ့ျ၏ဳ.ိၾႁချ ုကဲနူတျ လယူကႏာ႑႔ာညျိငကချၵ လယူကႏာ႑႔ာညျိၵ လယူကႏာ႑႔ ိံျာညျလ ါံျ ညုကႏေ႔ စၨ၏ဳ.့႑ႁာ.ညျနု႑ႁနု႑ႁမၶ ါ႑ႁလ.အျနုအျ စ႔ၚူငုျ ုဟ.ျနဖၿ.ျေၽ.ုကဆူၵ ႀ.ုဟ.ျ”ဆႈာလျ စဓႋငအုႉဆငကူျၵ းၠချူၢၠချ ဳဟဉ ဳၿႁဉူတျ ူငုျဘ႑တျ ာိနု.ချစငကညျ ါံျ လယစငကချ၏ဳ.ူတျ ာညျစင စ႑ာနရံျနဆံျ ုနူ.ျဆဃင ့႑ႁအကစျအႁာိံျမၶ ဘကဲလယဳဟဉဳၿႁဉူတျ စငကချ၏ဳ.ူတျ ာညျစင ညုကႏူုၡ. စၚ႔ုကႏ ်ယူငုျ ာိနု.ချစငကညျ ါံျ ေအငကချဘ႑႔ဆၾတျ ဳဟဉႊၾႁုျႊ?ယူတျုကႏ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔ာိံျမၶ လယဘံျနုအျူငုျအႁ ်ငကအျူကစျ်နမ.ချ နႊချနုအျမၶ
၁ၶ ာညျိငကချနရံျနဆံျ ဆအျ႒ဘသ
အ႑ႏၠမယ္.ဆဲ ………… ုဟ.ျ”ဆႈာႁချစဴ ………… ဋ.ညမယာညျၵ
စဥကာညျိငကချစဴညျ ………… ဋ.ညျိအညျမ ………… ဆဏုဴၠချမသါသၵ
ဖကဖဘသူ ………………နအၿ.တျာငာဆၾအျ …… နမံျနဆံျဆအျ႒ဘသၵ
စဥကာညျိငကချ႒ာသ …………… မသဋ.ညျဘိငကစျ ………… ်ငကစျစဴညျမယာညျၶ
၂ၶ ာညျိနရံျနဆံျ ပ.အျ
ိူူါကချ ………… းၠချ”အငုကာၣ …………… ဋ.ညမယာညျၵ
စဥကာညျိစဴညျ ………… ဋ.ညျိအညျုၿ.အျ …… ဖငကချီဓအျနုဆ.ၵ
ဖကဖဘသူ ………… … နအၿ.တျာငာလ.အျ ………နရံျနဆံျပ.အျုဴ.ၵ
ဋ.ညာညျိဓ …………… ၏ာ.ါ႑ႁေ.အညျ ………… ်ငကစျစဴညျမယာညျၶ
၃ၶ ာညျလ နရံျနဆံျ နးချုကႏဘသ
ဆီကဲ“ုၠချႊတျ ………… ူတျာအျအၾႁေကႏ ……… နိဆမယာညျၵ
စဥကာညျလစဴညျ ……………… ဋ.ညျိအညျ႒စ႔ ………… ည႔ဆကတၼၵ
နအၿ.တျတႁဆုကဲ ………… နးချဆကဲုကႏဘသ ………… နမံျနဆံျအသမၵ
ဋ.ညျစဥကာလ ……………… နိဆိအညျ ………… ်ငကစျစဴညျမယာညျၶ
ူုၡ.တ႑ႁ ေအငကချာစဓုဴၠချ စၚ႔ူငုျဘ႑့ျါံျ ာိံျမၶ
ညုကႏ နု.ညျါု႕စဥက ႒စႁချဆဴ.႔ုဴၠချ စနမချနမံျနဆံျ ုနူ.ျ နရံျနဆံျႀ.ဆ. ၫ႑ႁုကဲနူတျ ာညျစဥက ဘ႑႔ာါဴငၠချါံျ ိကႏုကႏ ေဳငချ၎ႁ နရံျနဆံျုဴၠချိႁၾချ ုနူ.ျဆဃငါံျ ဋ.ညျူကႏမႁချချ ါ႑ႁွကႏိၾႁချ၎ဲၶ ညုကႏ နပညျဆၿ.ချ ါု႕ာညျာ႑႔နူတျ ့ကဲါ႑ႁမၶ ိယ့ကဲာၢယ ာညျစဥက ဘၽုနူ.ျဆဃငာၢယ ုနူ.ာဆ့ူငကချ နု.ႁုနူ.ႁုဴၠချါံျ ါ႑ႁွကႏိၾႁချမၶ အာျုနူ.ျဘ႑႔ာါဴငၠချါံျနူတျ စ႑ာစၨစဤငအျ၎ဓ ုနူ.ျါံျ ့႑ႁုကႏ်ေနဳဓချနု႑ႁနု႑ႁမၶ ့ငကအျါံျမ ပတျဘၽုနူ.ျဆဃငနရံျနဆံျေဳငကုျါု႕စဥကာၢယ စနု.ႁုနူ.ာဆ ာ႑႔ဘကဲုကဲနမ.ချ့ကဲ်ါ႑ႁမၶ အက႔စဴညျ ာညျ… ာညျ့႑ႁ့ကဲေနမတျာညျအႁဘ႑႔ာါဴငၠချါံျ မႁချနုအျ စ႑ာနမံျနဆံျုနူ.ျဆဃင ူဤဉါံျ စငဆ.ျအက႔ ါု႕ာညျနမ.ချါံျ စဥက့ကဲါ႑ႁမၶ အဃ႔၎ႁ ။ငကအျ၎ႁ နုအျုဴ.မၶ
posted by jawpakao at 2:12 PM
နု.ညျါု႕ာညျစဥကအႁ “ုစျုဴၠချအဃ႔ စဴညျါအယ ာ႑႔၀ဓစဴညျမၶ ါု႕ာညျစဥက ေဳငချိယ ဳဟချန်ံျ ၫ႕ညညျ ိယဆဴယနုဴႁ ုၚငၠချႊတျဘအငကချအက႔ နုဴႁုဴုျုကႏဆၾငချ နုဴႁုဴုျုဴၠချုကႏ ညေကစျီကစျါု႕ဖုကါံျ ူႁူုဴၠချ (၂၅၀) ဆၿ.ႁ ၏စချုဴၠချစဴညျမၶ စၚ႔ေ“ု.အႁ ါု႕ာညျစဥက လယိကချးငၠုျ့႑ႁာ.ညျ လယိကချာႁချဆၾတျအ႔ါု႕လယအၿ့ျ့႑ႁာ.ညျအႁ ညုကႏ ုၚငၠစျဆႉငၠစျလယုကႏလယ ူကစျုဴၠချနစၳဘဤငၠုျ စဴညျါအယုဴၠချ ေွုျုျ ိကႏုကႏ ေဳငချအဃ႔ ညည႔ည.ည.ဆ.ျ ာ႑႔ုၚငၠစျအက႔ာ႑႔ုၚငၠစျ ာ႑႔ါနု.ႁအက႔ ာ႑႔ါနု.ႁမၶ
စၚ႔နဳအျ စနိဆမ.ဖျ လယ်စဴညျါအယုဴၠချုဴ.ေငကအျါံျ ဆႉငၠစျစၿ.ညျအဴဘညျာိံျအက႔ စၚ႔ုကႏ ူုျႊုျဆၾငချဘၾ. နဆညျ္ဟဉနပံညျ ူုျႊုျဆၾငချဘၾ. ႀငကအတျ္ပ. အႁ ါံျ ညဆၾတျအ႔ ုၚငၠစျဆႉငၠစျ ဘလ.်ငချ အႁ ူကစျုဴၠချနစၳဘဤငၠုျမၶ ေဳငချူကစျုဴၠချနစၳဘဤငၠုျ ညုကႏ၏ိ့အျ ႒စငၠချစု.ညျ့႑ႁာ.ညျ ဆစကညျ့႑ႁာ.ညျအက႔ ါု႕ာညျစဥက ိယ႒ါငစျူကစျိသအငအျးၠချနဆႁါံျ ါု႕ာညျစဥက ညုကႏ ေငကအျိံျေ. စၚ႔ုကႏ းၠချ့ႁဆ.တအႈ စၚ႔ုကႏ ုၾငညျးၠချစဥကူၾၠ့ျ၎ႁ ိံျေ.မၶ ွါယ ဘကဲူကႏိံျိံျါု႕ာညျစဥက ။ငကအျနဆံျနဆၾ့ျအႁ ဘကဲလယအႁရကချါ်.ညျုဴၠချ ုနူချႊငချုဴၠချ ါု႕ဖုကါံျမ ါု႕ာညျစဥက ူာဟၠဲုနူချူကစျုဴၠချိၾႁချမၶ
စၚ႔ုကႏ ူုျႊုျ ဆၾတျအ႔ ေါၡူငုျ ာညျစဥက နဖၿ.ျုကႏ၏ိ့အျ ။ငကညျပၾၠ့႑ႁ၏စ.ုအျုဴၠချ စၚ႔တချာ႑႔ဆ.ျုကဲနူတျ ညည႔မစျူ႑့ျ့႑ႁနဆချ ူလ.အျ လယုကႏလယ ူကစျုဴၠချနစၳဘအငကုျါံျ ၫႁ႑ုဴၠချိၾႁချနမ.ချၶ ူဃႏၠါံျ ိုျါနု.ႁ စနမချႀ.ဆ.အက႔ နုဴ.ညျုဴၠချ စနမချါု႕ ာစဤႁုကႏ ည.႔နဳဟအျူႃငချအႁၵ ူဃႏၠါံျ ။ငကအျ၏ိ့အျဖုကၫႁ႑ ဆဴယ္ငကူျ ူကစျ႒စငၠချုကႏ ေူႏကေဆႈေါၡူငုျ ဘကဲည.႔ေႁုျ စဥကအႁၵ စၚ႔ ဆုႉမ.ဖျ ၁၉၄၅/၄၆ ညေၽ.္ကႏဳဟၠႏ ုၚငၠုျစျအက႔ ိုျစအညျုဴၠချ ါနု.ႁာညျနု.ညျးၠချေမချအက႔ မညျအၾႁုကႏ ါု႕ာညျစဥက ွဲဖ.အင ါ႑ႁာႁုျါအတျၵ ါု႕ာညျစဥက ါ႑ႁဘဴယ။ယၫ႕ႀတးငုျာ.ညျၵ ါ႑ႁဘဴယၫ႕ႀတုာဴုျါု႕ ုာဴုျူတျ ေနဳဓချာၿင့ျအႁနမ.ချါံျ ါ႑ႁွကႏလ.အျုဴၠချမၶ ဘကဲအႁ၎ႁ ။ငကအျမ စၚ႔တချလယအၿ့ျ ုၾုျ့ႋုျုဴၠချုကဲနူတျ ညုကႏစၚ႔တချါု႕စဥက ိယဳဟဉႊၾႁုျႊ?ယိႁၾချူၾငၠညျညျ နႊုျိၾႁချနမ.ချၶ
ဘ႑႔”ုသစၚ႔ုကႏ ဆုႉမ.ဖျ ၁၉၄၈ ုၾငညျးၠချစဥက ါႁ႑ဘဴယ။ယအက႔ ညည႔ ဘကဲ၏စချလယုကႏလယ ူကစျုဴၠချနစၳဘဤငၠုျါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျစဴညျမၶ စၚ႔ဆၾတျအ႔ ေူကႏေဆႈ စဓူႈာ.ညျ ညည႔ိႈာငကတျုနမတျ႒ဖႈ လယူကစျုဴၠချ နစၳဘအငကုျါံျနူတျၫ႑ႁ ူဃႏၠါံျ ိကချအ႔ုကႏစ႑ေူကႏေဆႈနုဴ.ညျ ့႑ႁာ.ညျအက႔ ူကစျုဴၠချ နစၳဘအငကုျညမစျူ႑့ျါံျနူတျ ၫႁ႑မၶ စၚ႔ုကႏ ေဳငချ၎ႁ ေၽ.္ကႏဳဟၠႏ (္ညျွ.ညျ)ုၚငၠုျုဴၠချုၚၠငစျ စၚ႔ဘ႑ငၠချစၚ႔အက႔ ည.႔ေႁချနႊ.ညျအႁ ုၚငၠုျုဴၠချုၚငၠစျ နဘ.ျစဴအမသးၠချာညျ (ညည႔မစျူ႑့ျ) မၶ ။ငကအျလယအႁမညျအၾႁူတျ ့႑ႁေႁချဖၿယုဴၠချုကဲနူတျ ဆဏစအညျုကႏ ါု႕ာညျစဥက နုႍချစဴညျါအယုဴၠချ ညည႔မစျူ႑့ျ စၚ႔ုကႏ ဆၿ.ႁ ၁၉၄၈ ဆုႉမ.ဖျးၠချ ၁၃၁၀ ါငအကဳၚ႔ဆႈ ါံျအက႔ ါနု.ႁနဘ.ျးၠချာညျအၾင နုဴ.ညျုဴၠချ အဃ႔စဴညျါအယာညျ ိကႏုကႏ ေဳငချအဃ႔၎ႁမၶ
ေ႔ာငုျါ႑ႁ့ကဲာ႑႔ါံျ အဃ႔စဴညျါအယါံျ နွချုကႏ မ႔နဘ.ျစဴညျါအယာ႑႔ီတျ့႑ႁနဆချ မၶ ေ႔လ.အျနုအျါံျ အဃ႔စဴညျါအယ၎ႁါံျ နွချိၾႁချုကႏ နု.ညျါု႕စဥက ္ေငကအျစဴညျမၶ ပတျလယမညျအၾႁ အဃ႔စဴညျါအယ နဘ.ျာ႑႔ီတျာၢယ လယ့႑ႁဆၢၠအျဆ႑.အျနုအျ စၚ႔ုကႏ အဃ႔ ေၽ. ေႁချနႊ.ညျအႁ အငအျုဴၠချစဴညျါအယ ါံျမၶ ာ႑႔စဴညျါံျ ါု႕ာညျစဥက ူဃႏၠါံျ လ.အျနုအျိၾႁချ မစျူ႑့ျာံ ိံျမ႔စဴညျါအယ ့႑ႁနဆချၶ ူကစျနစၳဘအငကုျ ညည႔ ။ငက့ျ့ျ”ဆငၠ့ျ့ျါံျုကဲၵ ါ်.ညျနုအျိၾႁချူကစျိၾႁချနစၳဘအငကုျိႈာတျုနမတျ႒ဖႈါံျနူတျ စဴညျါအယန့ချနမ.ချၶ ဘကဲူကႏ့ကဲ့ကဲ စၚ႔ုကႏစဴညျါအယါု႕စဥက ိယဆဴ.႔ုဴၠချုကႏ ွဲစႋုျ ိယဆဴယုဴၠချူာဟၠဲနု.ညျါု႕စဥက နု.ညျဆၢႁချစဥက ရငက့ျူၾင့ျ ့႑ႁာ.ညျမၶ ဘကဲလယအႁဆဴယုဴၠချူာဟၠဲ ဆဴ.႔ုဴၠချွဲစႋုျါံျ ညုကႏါု႕စဥကနူတျိယဆဏဆာဤဲ ိယနမံျနဆံျနႊုျနမ.ချန်ံျ်ငကအျမၶ
စၚ႔ုကႏ ဆၿ.ႁ၎ႁ ါနု.ႁာညျ ့ူငကချ အကစျူတျ်ငကအျ ဆ႑ုျါ႑ႁနရံျနဆံျေ. ုၚငၠစျဆႉငၠစျာညျ =စ့ျူူက႔ စၚ႔ုကႏ အဃ႔စဴညျါအယာညျ ာစဤႁုကႏ ေၽ.္ကႏဳဟၠႏၵ ည.႔ေႁချနႊ.ညျၵ ည.႔္ကႏ်ငချၵ ည.႔နည.ူႍ.ၵ ည.႔ပဥႃနုဟညျၵည.႔နႊညျ အႁာိံျမၶ ူလ.အျ၎ႁရက႔်ံျူတျ၎ႁါံျ ၫ႕ုကႏ ါနု.ႁာညျ ဘ႑႔ာါဴငၠချ ရက႔်ံျူတျာိံျမၶ ညုကႏေ႔ ရက႔်ံျူတျအက႔ စအငကညျႊ?ယူတျ့႑ႁနဆချမၶ ညုကႏေ႔နူတျ ိယနမံျနဆံျနႊုျနမ.ချန်ံျ်ငကအျအက႔ လ.အျနုအျူတျ ရကစျလယအႁ စနု.ႁူတျာ႑႔ိၿ.႔ စအငကညျႊ?ယူတျ ညရကစျလယအႁ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔မၶ ပ႑ႁလယာွကႏိယာကုျူငုျေ႔ ညုကႏ ်ငကအျီဓအျွ.ညျါု႕ ်ငကစျုဴၠချအဃ႔စဴညျါအယာၢယ နမံျနဆံျနုအျ ုၚငၠစျဆႉငၠစျာညျ နုက.ႁ ဆၢႁချွ.ညျါု႕ ၏စ့ျူူက႔ေငကအျ်ငကေျါံျ ုကႏ၎ဓဆာဤဲ ဘဤငၠုျ္နေ.တျ၎ဓ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔မေသၶ
posted by jawpakao at 10:02 AM
လ.အျနုအျူငုျ ာ႕ ါနု.ႁု႑အျနဘဤ.ညျ ူငုျစအျနပညျဆၿ.ချဘကိႌႀ.ဆ. စင႑ၠချးၠချစႁချ ာ႑႔စငကအျအက႔ စဤၠငညျ်ကအျူတျ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔ ာိံျမၶ စၚ႔ုကႏူငုျါံျတ႑ႁ
ဆကနု‘.စင ်ၫႎညအရက ညဖ့.အင ါၫႌႁၶ
ည.နါဓါနအ. ညမာကနဳ ည ဖပ.အင ူႈႋႁၶ
ပၫဤ.ါနအ. ာီကမဆႁ ည ဖပ.အင ထ်ႇၠၶ
ိကနု‘.စင စၭငအဖနည. ည ဖ့.အင ီာႂၶ
စဓႋငုဴၠချၫ႕ ၏စုကင့ျနူ.ုညငအင စၚ႔ ဆကဖညုၭ ာ႑႔စငကိျ ာိံျမၶ
လယစဤငအျူတျ ေီငစဏ႔ဓ ါံျတ႑ႁ
“ုုျ်ဴညျ ။ငကညျမုံျေ.ုကဲနူတျ ့႑ႁဆဴယနႊ.ႁ ဆၾဉ ၏ာနာ.တျမၶ ်ငချဖၾဉ ။ငကညျေ.်ငကစျဋ.ညျ အတျန်ၿ့ျ စၿ.ညျုကဲနူတျ ့႑ႁဆဴယနုဴႁ စ႑ာမ.ချွ.႔ စၚ႔ါအာကုျ ာၿင့ျမၶ ။သ။ငကညျမ ေ.်ငကစျ်ုျနအဃအျအက႔ ုကဲနူတျ ့႑ႁဆဴယနုဴႁ ရံျး.အျမၶ စ႕ါငကူျဆစဏၠရငက့ျ ာၿၠႁုကႏစလ. ။ငကညျေ.်ငကစျိိငကုျုကဲနူတျ ့႑ႁဆဴယနုဴႁ ီမျလယဆစဏၠရငက့ျမၶ
“ုုျ်ဴညျါံျ _____။ငကညျမုံျ ________ ့႑ႁိံျနႊ.ႁေ၏ာ.႔
်ငချဖၾဉ်ငကစျဋ.ညျ _____အတျန်ၿ့ျစၿ.ညျ ___ ့႑ႁ“ု.ညျၫ႑ႁမ.ချွ.႔
။သ်ငကစျ်ုျါံျ ______ စၚ႔အငုဴ့ျ _______ ရံျး.ျလင့႑ႁစၳ
အဴစလ.မ ______ ်ငကစျိကု‘ ______ _ီာႂ့႑ႁုကႏါၳၶ
နု.ညျါု႕စဥက အငအျ်ငကစျဋ.ညျနဆဃ.ုကဲ ေူႁကနု.ညျါု႕အႁုကဲါံျ ုကႏါႁ႑ဆအင ်႑ႁဆအငစၚ႔ုကႏ နု.ညျါု႕နုဴႁုဴုျေငကအျလငၶ ။ငကညျ်ငကစျဋ.ညျနဆဃ.႔ န့.႔ိၾႁချုကႏ နု.ညျါု႕စဥကုကဲ လႁချမသ “ုုျ်ဴညျၵ လႁချမသ ်ငချဖၾဉၵ လႁချလယဆစဏၠရငက့ျ နစဴ.ျ်ငကအျအက႔ ႊငချိတျါု႕ေငကအျလငၶ